Blogs of aungphonemyat_'s friends / Free Video Chat Conferendo
Posts of aungphonemyat_ friends
Posted on 5/25/2013 by
အသံကြောင့် အိမ်ရှေ့သို့ကြည့်ဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်ထဲမှ မမကြီးများဖြစ်သည်။ လက်ထဲမှာလဲ လျှောက်လွှာစာရွက်တွေနှင့် ။ ရွှေရုပ်ကိုတွေ့တော့ အားလုံး မျက်နှာကြီးများပြုံးသွားကြသည်။ ဘာတုန်း ..... ရွှေရုပ် ဘာမှန်းမသိတဲ့အထဲ ပြန်ပြုံးပြရသည်။ ထို့နောက် ရွှေရုပ် ခြံတခါးနားသို့သွားကပ်ကာ
``မမတို့ အလှူလိုက်ခံနေတာလား ....ဟင်းဟင်း အဲ့ဒါဆို အဖေမရှိဘူး..´´
``ဟီးဟီး .. မဟုတ်ဘူး ရွှေရုပ်ရဲ့ အမတို့က တိုင်ပင်စရာရှိလို့လာတာ ...´´
``အင်းလေ ... အဲ့ဒါ ...အဲ့ဒါ အထဲဝင်မယ်လေ အေးအေးဆေးဆေးပြောကြတာပေါ့´´
``သြော် ... ဟုတ်ကဲ့ ...´´
ရွှေရုပ် အမြန်ပင် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်မိသည်။ ထို့နောက် အပြုံလိုက်ကြီး ရွှေရုပ်ကို တွန်းတိုက်ပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားကြသည်။ ခိုးခိုးခစ်ခစ်နဲ့ လက်ပံပင် ဆက်ရက်ကျတယ်ဆိုတဲ့ အမေ့စကားကိုပြန်ကြားမိသည်။ ရွှေရုပ်အ်ိမ်ထဲရောက်တော့ သူတို့က ရွှေရုပ်ဧည့်ခန်းက ဆက်တီတွေမှာ စနစ်တကျ ခြေချိတ်ထိုင်လို့ ....
အမယ် သူတို့ကဘဲ ကြီးကျယ်လို့ ... ရွှေရုပ် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ချာလပတ်လည်ရင်း ဘယ်နားထိုင်ရမှန်းမသိ ။ ထို့နောက် ချောင်တစ်နေရာကို အသေချာရွေးကာ ထိုင်ချလိုက်ရင်း သူတို့ကိုကြည့်လိုက်သည်။
``ရွှေရုပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ် ... သူက မြို့ကလာတာ ... နာမည်က ပိုပိုရှုပ်တဲ့ ... အရင်တုန်းကတော့ ကျောင်းသားပေါ့ .... ´´
ရွှေရုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးကို ကြည့်မိသည် ။ထိုအမျိုးသမီးက ခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ ရယ်ပြသည်။ ရွှေရုပ်လဲပြန်လည်ရယ်ပြရင်း ..
`ရွှေရုပ်ကတော့ အရင်တုန်းက ကျောင်းသူပါ ... ကျောင်းသားမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး အမက အရင်တုန်းက ယောင်္ကျားလျာလား....´´
ထိုအမျိုးသမီး မျက်နှာကြီး ညိုသွားသည်။ ရွှေရုပ်မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ရွာခံ အမကြီးက
``ဟယ် ...ရွှေရုပ်ကလဲ နင်အဲ့လိုမပြောရပါဘူး သူကငါတို့ အကျိုးစီးပွား အတွက်လာတာ ...´´
``ဟင် အမက ရွှေရုပ်တို့ရွာမှာ စက်ရုံလာထောင်မလို့လား ဘာစက်ရုံလဲ ´´
``မဟုတ်ပါဘူး .... ညီမလေးတို့ရွာလည်လမ်းကိစ္စပါ....´´
``သြော် ... အမက ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးမလို့လား... ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အမရယ် ...ကျမတို့ကလဲမတတ်နိုင်တာလေ ..ကျေးဇူးပါ ...´´
``ဟင် မဟုတ်ပါဘူး ...´´
ထိုအမကြီးမှပြာပြာသလဲ ငြင်းတော့သည်။ ထိုအခါ ရွာခံအမကြီးက
``ရွှေရုပ်ကလဲ အားနာစရာကွယ် ...အခုဟာက လူကြီးတွေက ရွာလည်လမ်းခင်းရအောင်ဆိုပြီး ခြံတွေကို နှစ်ပေတိတိ နောက်ကိုဆုတ်ပြီး ခြံစည်းရိုးပြန်ကာခိုင်းတဲ့ကိစ္စကို ရှင်းပေးမလို့ .... ´´
ရွှေရုပ် အထူးအဆန်းထိုအမကြီးကိုကြည့်မိသည်။ ထိုအခါ ထိုအမကြီးမှ
``ဟုတ်တယ်ရွှေရုပ် ရွှေရုပ်တို့ခြံတွေက ဘိုးဘွားပိုင်ခြံတွေလေ ... အဲ့ဒါ ခုခေတ်ကျမှ နောက်ဆုတ်ရတော့ ရွှေရုပ်တို့အတွက်မတရားဘူး ...အဲ့အတွက် မမလာခဲ့တာ ...´´
ရွှေရုပ်ထိုင်နေတဲ့နေရာကို ဟန်ချက်ပြင်လိုက်ရင်းနှာခေါင်းရှုံ့လိုက်မိသည်။ အပိုတွေ ... ရွာလည်လမ်းရှိရင် ကိုယ့်အိမ်တွေ ကိုယ့်ခြံတွေတောင် အလကားနေ နှစ်ပေမက ဈေးတက်သွားနိုင်သည်။ ခုတော့ ဘာကျောင်းသားမှန်းမသိတဲ့ အမျိူးသမီးကိုခေါ်ပြီး
ရွှေရုပ်အတွေးတို့ရပ်သွားရသည်။ ထို့နောက် ရွှေရုပ်ထိုအမျိုးသမီးကို ကြည့်လိုက်ရင်း
``အဲ့ဒါအမနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ ...အမကဒီကရွာသားလား....´´
ထိုအမျိုးသမီး ဒုတိယအကြိမ်မျက်နှာကြီးညိုသွားပြန်သည်။ ထို့နောက်
``အမက ဒီကရွာသားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်... ဒါပေမယ့် ညီမလေးတို့အနေနဲ့ ကိုယ့် မြေတွေပေးလိုက်ရတော့ အင်မတန်မှ နစ်နာလှပါတယ် ... အဲ့ဒါကြောင့် ....မမက ...´´
သူ့ကိုစကားဆုံးအောင် ပြောခွင့် မပေးနိုင်တော့ထို့ကြောင့်
``မမက ဘာလုပ်မလို့လဲ ..... မမနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ .... ´´
``အို .... မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့အရေးတွေအကုန်လုံးမမတို့အရေးပေါ့ .... ´´
``သြော်... ဒါဆို ရွှေရုပ်ကြောင်လေးဝမ်းချုပ်နေတယ် မမ...´´
ထိုအမကြီး မျက်နှာက ညိုရာကနေပြီး အနက်နုရောင်သို့ပြောင်းလာတော့သည်။
``အဲ့ဒါတော့ ၀မ်းနုတ်ဆေးတိုက်လိုက်ပေါ့ ရွှေရုပ်ရယ် ညည်းက အရမ်းအစသန်တာဘဲ အမရယ်တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ သူက စာလဲရေးတယ် ... ပြီးတော့ ပေါက်ကရတွေလဲ အရမ်းပြောတော့လေ ...´´
``အဲ့ဒါ ညီမလေးတို့ ဆန္ဒပြရမယ် ...´´
ဒီတစ်ခါတော့ ရွှေရုပ် အံ့အားသင့်သွားကာ
``ဆန္ဒက ဘယ်သူ့ကိုပြရမှာလဲ ... ´´
``ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါ ဆန္ဒပြတာတော့ဟုတ်ပါပြီ ဘယ်သူ့ကိုပြကြမလဲ ...´´
အိမ်ထဲရောက်နေသော မမအားလုံးက အသံတွေထွက်လာကြသည်။
``ဟုတ်တယ် ... ပြချင်နေတာကြာပြီ .... ဘယ်သူ့ဖြစ်ဖြစ် ပြလိုက်တော့မယ်...´´
``ဟုတ်တယ် တစ်နိုင်လုံးက ပြနေကြတာ ကိုယ့်ကလှည့်မှ ဘယ်သူ့ပြရမှန်းမသိဘူး ပြတော့ပြရမယ် ... ´´
ထိုအခါ အရင်တုန်းက ကျောင်းသား ဟု ပြောသောအမျိုးသမီးက
``ညီမတို့ပြရမှာက ရပ်ကွက်ရုံးမှာ ....´´
``ဟာ .... ရှက်စရာကြီး ......´´
``ဟုတ်တယ် မမတို့ပြရင်တော့ လူတွေအကုန်လာကြည့်ကြမှာ အဲ့ကျမှ အ၀ပြမယ် ... စည်းကမ်းရှိရှိ တန်းစီလှည့်တန်းပြီးပြမယ် ....´´
``အမအဲ့လိုပြတာတော့ဟုတ်ပါပြီ ...တန်းစီလှည့်တန်းပြီးဆိုတော့ ကွမ်းတောင်ပန်းထောင်တွေကိုင်ရမှာလား ... ရွှေရုပ်တို့က အဲ့ဒါဘဲလုပ်ဖူးတာ ... ´´
``ဘယ်ကသာ ခြံပြန်ရအောင်လုပ်ပေးပါ ... နှစ်ပေလောက်ပြန်လိုချင်တယ် .... ငါ့မြေငါ့ဟာ အဲ့လိုဆိုင်းဘုတ်တွေကိုင်ပြီး လှည့်ရမှာလေ ...´´
ရွှေရုပ် ရယ်လိုက်သည် ။ ရှက်စရာကြီး .... ထိုအချိန်တွင် အိပ်ခန်းထဲမှ အဖေ့ရဲ့ ချောင်းဆိုးသံထွက်လာသည်။ ထို့နောက်
``ရွှေရုပ် ... ´´
``ဧည့်သည်ကို ရေတိုက်လိုက် ...မောနေတယ် ... ပြီးရင် အိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက် .... နောက်ပြီး ပြချင်ရင် ငါ့ဆီလာခိုင်းလိုက် အဲ့လမ်းဖောက်ဖို့ပြောတာ ငါပြောတာ ... ´´
``ဟုတ် ...အဖေ့ကို ဘာပြရမှာလဲ ဟင်....´´
ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ ...ခုဆို ရွှေရုပ်တို့ရွာလည်လမ်းကြီးသည်လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီ ။ သာရေးနာရေး ဘာရေးညာရေး ထိုလမ်းမှပင် သွားလို့ရပြီဖြစ်သည် ။အရင်တုန်းက ရေမြောင်းဖြစ်နေသောလမ်းမှာ အခုအခါ ညနေတိုင်းကလေးတွေဆော့ကစားရာနေရာဖြစ်ခဲ့ပြီ ။ အခုတော့ အားလုံးနားလည်လောက်ပါပြီ။
update ရပ်ကွက် (၅) သို့ မဟာဆန်မုန်တိုင်း
``နေလုံးကြီးညိုလာပြီ....´´ ``ကောင်းကင်ကြီးနီနေပြီ...´´ ``လေတိုက်လာပြီတော့ ..´´ ``လေငြိမ်သွားပြန်ပြီ...´´ ကျမတို့ရပ်ကွက်မှာ အပ်ဒိတ်ကျကျ မဟာဆန်သူအကြောင်းကို အော်ဟစ်ပြောဆိုနေကြတယ်။ ``မုန်တိုင်းလာရင် စားစရာပြတ်မှာ ဆန်တွေဆီတွေဝယ်ရအောင်´´ ``ဟဲ့ .... လကုန်ပြီးဘယ်နှစ်ရက်ရှိလို့ ဆန်တွေဆီတွေဝယ်မှာလဲ ...´´ ``အင်...... ခုမှ ဆယ်ဲရက်ကျော်ဘဲ ရှိသေးတယ်....´´ ``ဘာ.....´´ ``အင်....´´ ``ဘာ ဆယ်ရက်ကျော်ဘဲရှိတာလဲ ဆယ်ရက်ကျော်ကြီးများတောင် ရှိသွားပြီ... အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲ ပိုက်ဆံ ....ဘယ်သောက်ဆံနဲ့ ဘာတွေဝယ်ခိုင်းနေတာလဲ...´´ ``ဒါဆိုလဲ ချေးငှားပြီးဝယ်လေ ... နောက် မုန်တိုင်းဝင်မှ ယောင်္ကျားလုပ်နေပြီး အမျှော်အမြင်မရှိဘူးမလုပ်နဲ့...´´ ဘေးအိမ်မှလွှင့်ပျံလာသောစကားများကြောင့် ရွှေရုပ် သဘောကျစွာပြုံးမိပါတယ်.....ဒါဘဲမဟုတ်ပါဘူး... ``ဟေ့ ဘာတွေပြောနေတာတုန်း .... မုန်တိုင်းဝင်ရင် ကြက်သားဈေးတွေကျတယ်အကောင်လိုက်တောင် တစ်ထောင်ထဲနဲ့ရတယ်.... ´´ အရှေ့အိမ်ကနေ ကျမတို့ခြေရင်းအိမ်ကို လှမ်းအော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ `` ဟာ ခင်ဗျားတို့က ဘယ်လိုလဲဗျ သူများတစ်ကာတွေ မုန်တိုင်းဝင်မှာစိုးရိမ်လို့ ကြောက်နေတာ ခင်ဗျားက ကြက်သားစားချင်နေတာလား.. ခင်ဗျားဘယ်လိုလူလဲ ....ဦးနှောက်မရှိဘူးလား...´´ အဲ့မှာဘဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်နှစ်အိမ် မုန်တိုင်းစ၀င်ပါတော့တယ် ။ တကယ့်လာမယ့် မဟာဆန်က ဘယ်နေမှန်းမသိပါဘူး ..... သူတို့မုန်တိုင်းကတော့ ရွှေရုပ် ပြတင်းပေါက်ကနေ အသာချောင်းလို့ရအောင်ကို ထန်ပါတော့တယ်။ ``ဦးနှောက်ရှိလို့ လူစကားပြောတာပေါ့ မဟုတ်ရင် ငါက နင့်လိုဟောင်နေမှာပေါ့... ဟိုတစ်ခါနာဂစ်တုန်းက နင်တို့ဘဲ ကြက်သေကောင်တွေ ငုံးသေကောင်တွေသွားဝယ်ပြီးကြော်စားတာ တဖြဲနှစ်ဖြဲနဲ့ ဘာခုမှ မုန်တိုင်းကိုကြောက်တာလဲ ....´´ အိမ်ရှေ့အိမ်က အဒေါ်ကြီးပြောလဲပြော ထမီကို တိုတိုဝတ်လိုက်သေးတယ်.။ ထို့နောက် ၀ုန်းကနဲ အိမ်ပေါ်ကခုန်ချပြီး အင်္ကျီလက်ကိုပင့်တင်လိုက်တယ် ... ရွှေရုပ်မှာလဲ ချောင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ရင်တွေတောင်တုန်လာတယ်လ .... ခြေရင်းအိမ်ကလဲ ဗလသာမရှိတာ ဇတော့ရှိတယ် .... သူလဲ အိမ်ရှေ့ကို ပုဆိုးတိုတိုပြင်ဝတ်ရင်းထွက်လိုက်တယ်....ရွှေရုပ်လဲ ချောင်းကြည့်တဲ့နေရာကနေမမြင်ရတော အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးရဲ့ လိုက်ကာကိုအကာအကွယ်ယူကာ မဟာဆန်မုန်တိုင်းကို ဆက်လက်ချောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်...... ``ဘာပြောတယ် .... ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို ဟောင်တယ်လေးဘာလေးနဲ့ ခင်ဗျားက ဘာသောက်ဆင့်ရှိလို့လဲ ..... လူကြီးလူကြီးလိုမနေဘူး ... ခင်ဗျား နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာဆိုတာ လက်သုတ်လုပ်ပြီး အထုပ်ထုတ်ရတာဟာလောက်ဘဲသိနေတာ အဲ့ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ် ...ခင်ဗျားမှာ အိုင်ကျူနောလစ်မရှိဘူးလို့ .... ´´ ``ဟင် .....´´ တစ်ဖက်ခြံက အန်တီကြီးကြောင်သွားသည်။ သူအဲ့လို အင်္ဂလိပ်လိုမှုတ်တာကို တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် မကြုံဘူး... ဒါပေမယ့် မသိဘူးပြောလဲ သူများအထင်သေးရာရောက်မယ် ဒါကြောင့်နားစွန်နားဖျားကြားတာနဲ့ ရမ်းသမ်းပြောလိုက်ရတယ်....´´ ``ဘာ အိုင်ထဲကျူရိုးတွေနားမှာ ချက်စနောရစ် ဗီဒီယို ငါကောင်းကောင်းကြည့်ဖူးပါတယ် ... ငါ့နောက်မှထမင်းစားလာပြီး လူတတ်ကြီးလာမလုပ်ပါနဲ့...´´ ခြေရင်းအိမ်ကလူပထမ အန်တီကြီးဘာပြောလိုက်မှန်းမသိလို့ အတော်လေးစဉ်းစားယူလိုက်ရတယ် ... ပြီးတော့မှ ဗိုလ်အောင်ဒင်ရယ်သလိုရယ်လိုက်ပြီး ``ခင်ဗျားကို အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဗျ ... ဘယ်နှယ့်ချက်စနောရစ်ကိုပြောနေတာလဲ ... ခင်ဗျားကို ဦးနှောက်အသိဥာဏ်မရှိဘူးပြောတာ.... ဟားဟားဟားဟား....´´ တစ်ဖက်က အန်တီကြီး မျက်နှာကြီး သုန်မုန်သွားတော့သည်။ ထို့နောက် အရှက်ပြေ ``အပိုတွေ နင့်အမေမွေးတုန်းက ငါဆွဲထုတ်ပေးထားလို့ နင်လူဖြစ်နေတာ ငါ့များပြန်ခွပ်ချင်သေးတယ်...´´ ``အင်....´´ ခြေရင်းအိမ်ကလူ ငြိမ်သွားပြန်တယ် .... ဒီတစ်ခါတော့ သူအဲ့အန်တီကြီးကိုမနိုင်နိုင်တော့ ... အဲ့အန်တီကြီးကိုသူ့အမေဗိုက်ထဲက သူဆွဲထုတ်လို့လဲမရတော့ ....ထိုအန်တီကြီးမျက်နှာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်။ အန်တီကြီးကလဲ `နင်ဘာပြောမလဲ .....ငှဲငှဲ ´ ဆိုသော အကြည့်နှင့်မိန့်မိန့်ကြီးပြန်ကြည့်နေလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့်... ``ခင်ဗျား.... ခင်ဗျားနော် ..... ကျုပ်က လူကြီးမို့ကြည့်နေတာ.... ကိုယ်လင်ကိုယ်မယားတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောတာကိုခင်ဗျားက ကြားက၀င်ပြီး အာချောင်တာလေ...´´ ``အောင်မယ် .... နင်တို့ကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောသာပြောနေတာ နင်တို့တိုးတိုးကို တစ်ရပ်ကွက်လုံးကြားတယ် ....´´ ``ဟင်.....´´ ထိုအခါ ထိုလူရဲ့မိန်းမက ရှက်လို့ထင်တယ် သူ့ယောင်္ကျားကို အိမ်ထဲကို ဆွဲခေါ်သွားတော့သည်။ ထိုအချိန်မှာဘဲ မဟာဆန်မုန်တိုင်းက ပြီးဆုံးသွားတော့သည်။ ဒါပေမယ့် ``ဒုန်းး...... ဒိုင်း...... ဒုန်း...ဒိုင်း ....ဒုန်းဒုန်း ဒိုင်းဒိုင်း.......´´ ရွှေရုပ်လန့်နိုးလာသည်။ မုန်တိုင်းများဝင်ပြီလားလို့ပေါ့ .။ ထို့နောက်အသံကိုဆက်လက်နားစွင့်တော့ အိမ်နောက်ဘေးအိမ်ကမှန်းသိလိုက်သည် ။အချိန်ကိုကြည့်တော့ ဆယ့်နှစ်နာရီခွဲ ။ မှန်ပေါက်ကနေ ခန်းစီးကိုအသာလှပ်ကြည့်တော့ ထိုအိမ်က လူကြီး အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တက်ပြီး သွပ်တွေ တူနဲ့လိုက်ထုနေခြင်းပါ။ အော်....... မဟာဆန်....မဟာဆန် ...... အကျိုးပေးပုံများနော်.... အိပ်တောင်မရပါဘူး အဲ့နေ့ညကလေ.......... (သြော်.... ရွှေရုပ်ရခိုင်ပြည်မှာနေတာလားတဲ့ မဟုတ်ဘူး ရွှေရုပ်တို့ အပ်ဒိတ်ရပ်ကွက်က မှော်ဘီမှာရှင့်...) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ ရွှေရုပ်
``နေမကောင်းဖြစ်တာ အားနည်းလို့နေမှာပေါ့... အကြောဆေးသွားထိုးလိုက်...´´
``အပူကြီးတာနေမှာ မနက်လေးနာရီလောက်ထပြီး ခေါင်းပေါ်ကနေရေလောင်းချလိုက် ...ပျောက်ရော ´´
ရွှေရုပ်ဘေးမှာ ရပ်ကွက်ထဲမှ အပ်ဒိတ်ဖြစ်သူမမများ အန်တီများ ၀ိုင်းနေပါသည်။ လူက မနေ့က့ အင်း... ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်ပြန်ပြောရင် ပေါင်လှန်ထောင်းရာကျမလားမသိဘူး ...လှန်တော့မထောင်းချင်ပါဘူး ...မလှန်ဘဲထောင်းဆိုတော်သေး .... မနေ့က ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ နေပူကြီးစီးပြီးသကာလ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အပင်လေးတွေညှိုးနေတယ်ဆိုပြီး ရေပိုက်ဖွင့် ... သီချင်းတညည်းညည်းဆို အပင်တွေရေလောင်းလိုက်တာ ...ဟော ... ခုကျတော့ နှာစေးပြီးချောင်းဆိုး ဖြစ်တော့သည်။ ဆိုင်မသွားချင်တာနဲ့ ကိုယ့်ဘေးမှာ အပ်ဒိတ်ရပ်ကွက်မှ လူတတ်ကြီးများက စေတနာပလပွနဲ့ ဝေဒနာတွေ အကုန်ကြွအောင် ပြောနေကြခြင်းပင်။ ``အအေးပတ်သွားတာနေမှာ မနေ့က ရေလောင်းတာတွေ့လိုက်တယ်...´´
``ဘာမှ မဟုတ်ဘူး အပူရှပ်သွားတာ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား...´´
နေမကောင်းဘူးဆိုမှ လူကို တွန်းလားထိုးလားလုပ်လိုက်သေးတယ်....အားလုံးကြားမှာ မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နှင့် မေးသမျှကို ခေါင်းငြိမ့်ထောက်ခံရသေးသည်။
``ဟဲ့ သူကအပူဘယ်ရှပ်မလဲ ရှပ်ချင်ရှပ် နင့်သားလေးရှပ်တာနေမှာပေါ့ ....´´
``ဟုတ်တယ်လေ ...နင့်သားက ရေကိုခဏပဲကိုင်ပြီးဖျားတာ ... ဒီမယ် ရွှေရုပ်က ရေအကြာကြီးကိုင်ပြီး အအေးပတ်တာ..... ´´
အအေးပတ်တယ်ဆိုလဲ ရွှေရုပ်ခေါင်းညိမ့်ရ၊ အပူရှပ်တယ်ဆိုလဲခေါင်းညိမ့်နဲ့ လူတောင် ရူးချင်သလိုလိုဖြစ်လာတော့တယ် ....ဒါတောင်
နဲ့ငြင်းနေကြသေးတယ် ။အဲ့အချိန်မှာဘဲ အဖေပြန်လာတော့ ဘေးအိမ်က ဆရာမအပျိုကြီးကို ``ကဲ ညည်းညီမကို ညည်းဘဲ ဆေးခန်းလိုက်ပို့လိုက် ဆေးထိုးပေးလိုက် .... ´´
ဒါနဲ့ ရွှေရုပ် ခေါင်းတစ်ခါခါ လက်တစ်ခါခါနဲ့ ဆေးခန်းကို လိုက်သွားရပါတော့တယ်...လမ်းတွင်
``မထိုးလို့ရမလား ...ဆေးထိုးတာ ခွေးကိုက်သလောက်လေးနာတာကို...´´
ဆရာဝန်မသည် ရွှေရုပ်ကိုပင်မငဲ့ တစ်ဘက်ခန်းသို့ပြေးကာ ဆေးပုလင်းလည်ပင်းကိုခွဲလိုက်ပါတော့သည်။
ရွှေရုပ်လဲသတိအနေအထားဖြစ်သွားပါသည်။ ``ညီမလေးမှောက်လိုက်မကြည့်နဲ့  တင်းမထားနဲ့ ....´´
``မကြောက်နဲ့ မကြောက်နဲ့ ဆေးထိုးတာမနာပါဘူး ဆေးဝင်သွားမှာ နဲနဲလေးအောင့်တာ....´´
ဟုတ်တယ်ဟုတ်သည်။ ဆေးဝင်သွားကာမှအောင့်တော့သည်။ ``ချေပေးလိုက် ချေပေးလိုက်....´´
ဆရာမသည် ဆေးထိုးသည့်နေရာကို လက်ဖမိုးနဲ့ချေသည်။ ရွှေရုပ်မျက်ရည်မကျအောင်ထိန်းထားရင် ထမည်အပြုတွင် ``ခွပ်...´´
``နောက်တစ်လုံးလေ .... ဟိုဘက်ခြမ်း´´
အပ်ဒိတ်ရပ်ကွက်တွင် အပ်ဒိတ်ဆရာဝန်မမကတော့ လက်စွမ်းပြလိုက်တော့သည်။ အပြန်လမ်းတွင် ဆရာမကိုလဲ စကားမပြော၊ အိမ်ရောက်သည့်အခါတွင် အဖေ့ကိုလဲစကားမပြောဘဲ အိပ်ယာထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် အခန်းပြင်မှ
``အ ကုန်စားချင်တယ် ...၀ရင်ဝပါစေ ...ဒီနေ့တော့မရှောင်တော့ဘူး အကုန်ဝယ်လာခဲ့ အကုန်စားမယ်..´´
``အေးဖျားနေလို့သာဘဲ ....မနက်ဖြန်လဲ ဆေးသွားထိုးလိုက်ဦး ....သုံးရက်လောက် ဆက်တိုက်ထိုးရင် ပျောက်သွားမှာပါ...´´
တိုးတိုးပြောရင်း အဖေ့အား ``မီး ကြာဇံကြော်စားမယ် .....၀ယ်ခဲ့....´´
ပြောလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် အဖေသည် ရွှေရုပ်မကြားအောင် သူ့ဘာသာတစ်ကိုယ်တည်း ... ``ဖျားနေလို့သာပါဘဲ.... စားပေါ့...မနက်ဖြန်မှ မသက်သာရင် ဆေးထပ်ထိုးခိုင်းဦးမယ်....´´
အဖေပြောလဲပြော ...... အ ပြင်လဲထွက်သွားပါသည်။ ရွှေရုပ်လဲ အိပ်ယာထက်တွင် အိပ်ဒိတ်ရပ်ကွက်ရဲ့ အိပ်ဒိတ်ဆရာဝန်မမရဲ့ အပ်အဖျားကို မျက်လုံးထဲမြင်ရင်း သတိအနေအထားဖြစ်သွားပါတော့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာဘုရင်ဧကရာဇ်မင်းမြတ် ချီးမြှင့်တော်မှုသော စာပေါဂုရုဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ ၊ထို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဘုရင်ခံမင်းမြတ်ချီးမြှင့်တော်မှုသော အုန်းမုတ်ခွက်(ရေအိမ်တက်ရန်)နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်ရ ဆရာမကြီးဒေါ်ရွှေရုပ် ဇယတုဇယသဗ္ဗမင်္ဂလံ ။ ။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ခုနှစ်၊ နှောင်တန်ခူးလဆန်း(၄)ရက်၊ ၃၀၁၃ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁၅)ရက်၊တနင်္လာနေ့သည် မဟာသင်္ကြန်အကြတ်ရက်ဖြစ်သည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၆)ရက်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ဧပြီလ (၁၆)ရက်၊အင်္ဂါနေ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော် အစိုးရ စံချိန်တော်နံနက်စက်(၈)နာရီ (၁၀)မိနစ်၊(၄၄)စက္ကန့်အချိန်တွင် မဟာသင်္ကြန်တက်၍၊၁၃၇၅ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၇)ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြီလ(၁၇)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် မဟာဘုတ်တွက်ကိန်းအရ တနင်္လာဂြိုလ်သည် အထွန်းအိမ်တွင်ရှိသောကြောင့် တနင်္လာနံ ထွန်း၍ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်သည် ပုတိအိမ်တွင်ရှိသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဟူးနံပုပ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် အင်္ဂါနေ့တွင်အတာတက်သောကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးများအတာစားသည်။ မှတ်ချက်- ဆရာမကြီးဒေါ်ရွှေရုပ်သည် ဤအထိမဟာသင်္ကြန်စာအား တစ်ရွက်သုံးရာဝယ်ကာ ယူ၍ ကူးချထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အောက်ဘက်တွင် ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အကောင်းစားရန်ကို အဲကောင်းစားရန်ကို ရည်သန်ကာ စေတနာရှေ့ထား၍ ဖြီးဖြန်း ပြောဟောထားသည်များကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါရန်….. တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင်း ပြောပါများပါးစပ်ညောင်း၍ သွားပါများခြေထောက် ညောင်းနေလိမ့်မည်။ အလုပ်အကိုင်တွင် အိပ်ယာပေါ်တွင်အိပ်ပြကာ မော်ဒယ်လုပ်ရခြင်း၊ အိမ်သာကြွေခွက်တွင် အီးအီးညှစ်ကာ သရုပ်ပြရသည့် အလုပ်များတွင် ၀င်ငွေကောင်းနေ လိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် မိန်းကလေးများ အိမ်သာဝင်ခါနီ်းချိန်တွင် ရည်းစားစကားပြောခံရကိန်း ကြုံသောကြောင့် အောင့်ထားရလိမ့်မည်။ ယောင်္ကျားလေးများသည်လည်း အင်းအင်း ပါချိန်တွင် အဖြေရကိန်းကြုံမည်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းမာရေးတွင် အူအတက်ပေါက်ကိန်းမြင်သည်။ အကယ်၍ အူအတက်မပေါက်ခဲ့သော် အောက်အတက်ပူလိမ့်မည်။ ယတြာ- အညံ့များပျောက်စေရန် အုန်းပင်ကို လက်သီးနှင့် ခပ်နာနာထိုးပြီး အောင်ပြီ ဟုသုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုရန်။ အောင်ပြီလားတော့မသိပါ.. အုန်းသီးကြွေကျလို့ ကမ္ဘာမြေကြီးဆွဲအားကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ရကိန်းရှိမည်။ တနင်္လာသားသမီးများသည် ယခုနှစ်အတွင်းလမ်းလျှောက်လျှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြေးလျှင်ဖြစ်ဖြစ် ခြေထောက်ကိုသာ အားထားနေရလိမ့်မည်။အလုပ်အကိုင်တွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ခရီးတွင်အောင်မြင်မည်။ ဥပမာ- ခရီးဝေးကို ကုန်းကြောင်းလျှောက်ရသောလုပ်ငန်းများ လမ်းကိုကုန်းကုန်းကွကွလျှောက်ရသောလုပ်ငန်း ။ အချစ်ရေးတွင် ခွေးကိုက်ခံရသော ဒဏ်ရာအား ကောင်မလေးမှဂရုဏာသက်သောကြောင့် ချစ်သူရကိန်းမြင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခွေးကိုက်ခံထိအောင်နေပါ။ ကျမ်းမာရေးတွင် ချူချာမည် ။အကယ်လို့ မချူချာခဲ့လျှင် ကျမ်းမာရေးကောင်းနေမည်။ ပညာရေးတွင် ခိုးချမှစာမေးပွဲအောင်မည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်မှာ မိုက်ခရိုလေးတွေသေချာပြင်ဆင်ထားရန်။ အဆိုးများပျောက်စေရန် ကုတ်ကိုင်းကိုသွားကာ ကုက္ကိုလ်ကိုင်းကိုခို၍ ကွိကွိကွကွပြောပါ ။ အင်္ဂါသားသမီးများသည်ယခုနှစ်တွင် စကားပြောတိုင်းအသံများထွက်နေလိမ့်မည်။အိမ်တွင်မွေးထားသော တိရစ္ဆာန်များရှိက ဇီးရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဝင်ငွေကောင်းနိုင်သည့် ကြက်ဝက်ဘဲဆိတ် မွေးထားရန်ဖြစ်သည်။ ရှောင်ရန် -သမီးမွေးထားခြင်းမှရှောင်ကြင်ရန်။ ယခုနှစ်အတွင်း အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် င်္ဇီးပေါင်းထုတ်ရောင်းခြင်း၊ ဇီးသီးထုတ်ခြင်း သူများအပေါ်တွင်ဆရာလုပ်ခြင်း၊ ညာစားခြင်းအလုပ်များ ၊ တွင် ၀င်ငွေကောင်းနေလိမ့် မည်။ အချစ်ရေးတွင်ဆရာမများကိုမကြိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကြိုက်မိပါက ဆရာမ လုပ်ခြင်း ခံရကိန်းရှိသည်။ ပညာရေးတွင်မှု စာကျက်လေအိပ်ချင်လေဖြစ်သော ကြောင့် အိပ်ချင်လာသောအခါ စာကျက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းမာရေးတွင် ဆံပင်ထဲတွင် သွေးမတိုးခြင်း ၊ဆီးသွားသောအခါ အရည်များသွားခြင်း ၊ အိပ်သောအခါ မျက်လုံးမှိတ်မိခြင်းများဖြစ်နေ လိမ့်မည်။အဆိုးများပျောက်စေရန် အိမ်ရှေ့တွင်ဇီးပင်ရှိလျှင်ခုတ်ပစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မရှိလိုက်စိုက်ပါ။ ရာဟု/ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်သောကြောင့် စိတ်ဓါတ်မကျစေရန် စိတ်ဓါတ်အား ငါးကိုးအိတ်နှင့်ထုတ်ကာ အုန်းပင်ပေါ်တင်ထားရမည်။ အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ခြင်း (ရုပ်ရှင်ရိုက်လျှင်သတိထားပါ … ရှင်နေသောကြောင့် ကိုယ်ပြန်အရိုက်ခံရကိန်းကြုံမည်။ ထို့ကြောင့်ရုပ်သေရိုက်ပါလေ… ၊ ကားရိုက်လျှင်လည်း သတိထားပါ။ ကားပိုင်ရှင်မတွေ့ခင်ရိုက်ပါလေ။ မဟုတ်လျှင် ပြန်အရိုက်ခံရလေမည်။ အချစ်ရေးတွင် ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေသူအားကြိုက်မိရင်း ကိုယ်ပါသွက်သွက်ခါအောင် ရူးသွားနိုင်သည်။ ပညာရေးအတွက် ကြိုးစားသလောက် အရာမထင်ဖြစ်တတ်သည်။ အရာထင်အောင် ဘောပင်မှန်ကောင်းကောင်းဖြင့်ရေးပါလေ။ ကျမ်းမာရေးဘက်တွင် အိပ်ဆေးနှင့် ၀မ်းနှုတ်ဆေးတွဲစားမိသောကြောင့် အိပ်နေရင်းဝမ်းသွားနိုင်သည်။ ယတြာ-အညံ့များပျောက်စေရန် လပြည့်ညတွင် လမင်းကြီးကိုမော့ကြည့်ရင်း လေးဖြူ၏ ကိုယ့်ရဲ့ငွေလမင်းသီချင်းကို အကျယ်ကြီး အော်ဆိုပါရန်။ (ခဲပေါက်ခံရမည်) ကြာသာပတေးသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် ဆင်ဖမ်းမည် ကျားဖမ်းမည်ဟု ကြွေးကြော်ရကိန်းရှိသည် ။ သို့သော်လက်တွေ့တွင် ယင်ကောင်တောင်မဖမ်းနိုင်သည့်အပြင် ပျားတုတ်ခြင်းကို ခံရနိုင်သည်။ စီးပွားရေးတွင် ဖ၀တ်ထုတ်နှင့်စသော လုပ်ငန်းများအကျိုးပေးမည်။ ဥပမာ ဖျာရောင်းခြင်း ၊ ဖြုတ်၊ မွှား၊သန်း လက်လီလက်ကား ဖြန့်ချီခြင်း စသည်။ ကျမ်းမာရေးတွင် ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ကြုံရမည်။ ထို့ကြောင့် ၀မ်းကို ကြိုးမချည်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် ဖ၀ထုတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်သော သူများနှင့်ဖူးစာဆုံနိုင်သည်။ ဥပမာ - ဖုန်းဟန်းဆက်ရောင်းသူများ- ဖိုင်တွဲရောင်းသူများ ပညာရေးတွင်ဘက်တွင် ကြိုးစားပါသော်လည်း စာမေးပွဲတွင် စာမတိုးသောကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခိုးချပါလေ။ ယတြာ - အညံ့များပြေပျောက်စေရန် ဖာတစ်လုံးခေါင်းရွက်ကာ လမ်းတကာလှည့်ပြီး ဖားလို“အုံးအမ် အုံးအမ်” အော်ပါ ။ သောကြာသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် ရယ်လျှင်ပါးစပ်ကြီးနဲ့ ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ ထမင်းစားပြီးလျှင် အိပ်ချင်စိတ်များနေလိမ့်မည်။ စီးပွားရေးတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သန်းတုတ်ကုမ္ပဏီဖွင့်လျှင် လုပ်ရသောအလုပ်များအောင်မြင်မည်။ အဓိကအားဖြင့် ခေါင်းသန်းရှိသော အိမ်ထောင်သည်များ ဖောက်သည်ဖြစ်မည်။ အချစ်ရေးတွင် သောကြာသမီးများသည် အောက်….အင်း အောက်ပြည်အောက်သားတွေနဲ့ ဖူးစာဆုံနိုင်သည်။ သောကြာသားများသည်လည်း အောက်…(ဟင်…အောက်ကကိုမလွတ်နိုင်ဘူး) သူတို့လဲ အောက်ပြည်အောက်သမီးများနှင့်ဖူးစာဆုံနိုင်သည်။ ပညာရေးတွင် ကျက်သောစာများရကာ မကျက်သောစာများမရဖြစ်နေလိမ့်မည်။ ယတြာ- စာဥသီချင်းဆို၍ သစ်ပင်တက်ကာ စာကလေးများအား စာမကြီးလိုအစာ ကျွေးပါလေ။ စနေသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် ကြည့်လျှင်မြင်နေရမည်။ မကြည့်လျှင်မမြင်ရသော နှစ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးတွင် ထန်းပင်တက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးပေးမည်(ပြုတ်ကျသောကြောင့်) ။ အချစ်ရေးတွင် တုတ်တိုးအိုးပေါက် ပြောတတ်သော ချစ်သူရကာ လူကြားထဲတွင် အရှက်ရနိုင်သည်။ ပညာရေးတွင် ကကြီးကနေ အအထိကို မရသောကြောင့် အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားရကိန်းမြင်သည်။ ရပ်ဝေးမှ စာများလာမည်။ စာများအပြင် ကျီ်းများခိုများလာမည်။ ကျမ်းမာရေးတွင် လေလည်ချင်သောကြောင့် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသောနေရာကိုသွားကာ လေလည်မိသဖြင့် လေဖြတ်နိုင်သည်။ ယတြာ- ခါးတောင်းကိုမြှိင်နေအောင်ကျိုက်ကာ ပေတရာလမ်းတွင် ဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းလျောက် ၍ ဟိုးအရင်က သီချင်းဖြစ်သော “ပေတရာကို လျှောက်ပါလို့မြင်သလောက်ပြလိုက်ချင် ” အစရှိသောသီချင်းကိုအော်ဆိုပါရန်။ ------------------------------------------------ ဤတွင်နိတ္ထိတံ ၊ပတ္ထိတံ တုံချန် ကလုံကလွမ်၏။ မေတ္တာရှေ့ထား၍ ဓါးမြှောင်ကျောတွင်ကပ်ဖွက်တတ်သော ဆရာမကြီးဒေါ်ရွှေရုပ်
update ရပ်ကွက် -၃
Posted on 2/21/2013 by
“ ရွှေရုပ်ရေ … ” ရွှေရုပ်ကြည့်လိုက်တော့ အမကြီး ခင်စန္ဒာ၊ “ဟယ်…လာလာ မမ… ဘယ်ကလှည့်လာတာတုန်း..” “ဘယ်ကမှလာတာမဟုတ်ဘူး ဟိုလေ… နင့်ဆီမှာထိုးလို့ရလား …” “ဘာရယ် …” ရွှေရုပ် အလန့်တကြားအော်လိုက်မိသည်။ ဒါကို အမကြီး ခင်စန္ဒာက သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးထဲက စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကိုတုတ်ပြသည်။ ကြည့်လိုက်မိတော“့ အင်္ဂါဟူးသား ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နှင့် ဂဏန်းနှစ်လုံး “ဟင်…” “အဟီး… ငါတို့ဆီမှာ အဲ့ဟာထိုးလို့မရတော့ဘူး ပိတ်သွားလို့ ... အဲ့ဒါ နင်တို့ဆီမှာရနိုင်မလားလို့ ငါကြားထားတာ နင်တို့ရပ်ကွက်က မရတာမရှိဘူးတဲ့…” ရွှေရုပ် ရှုံ့မဲ့သွားသည်။ ဒါနဲ့ အဲ့ဂဏန်းနှစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ ကိုးခြောက်ကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသည်။ “အဲ့ကိုးခြောက်ကို ထိုးမှာလား … ” “ဘယ်က ကိုးခြောက်ကိုထိုးရမှာလဲ …ခြောက်ကိုးဟဲ့.. ဆရာက အရမ်းတော်တာ သူက အတိတ်တွေဘာတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးနော် …ပေးလိုက်ရင်တည့်ဘဲ … ထိုးလိုက်ရင်လဲ တည့်လွဲ …အဲလေ တည့်ဘဲ… လုပ်စမ်းပါအေ … နှစ်သောင်းဖိုးလောက် …” “ဟင် …. ” ရွှေရုပ်လန့်သွားသည်။ ဟုတ်သည်လေ။ နှစ်သောင်းဆိုတာနည်းတဲ့ပမာဏလား မြို့ထဲသွားရင် ဗိုက်ကားအောင် စားလို့ရသေးတယ်။ သူ့ကြည့်တော့အဟုတ်ရှင်။ အဲ့ဒါနဲ့ဘဲ ဘေးက နှစ်လုံးမမကို ပြေးတွေ့ရတယ် ။ ရွှေရုပ်မှာ အဖမ်းမခံရဖူးသောသူခိုးလို အထက်ပါ အမကြီးအား နှစ်လုံးထီထိုးပေးရမည့် ကိစ္စကိုအတော်လေး စွန့်စားစကားပြောရတော့သည်။ သြော် ရပ်ကွက်ထဲက အက်ဒိတ်ကျကျ နှစ်လုံးမမအကြောင်းလဲပြောပြရဦးမယ်။ သူမက နှစ်လုံးကို အလွန့်အလွန်မြတ်နိုးခုံမင်သူဖြစ်ပြီး မနက်ရောညရော နှစ်လုံးထိုးသူဖြစ်သည်။သို့သော် သူမ၏ ယောင်္ကျားက ရွှေရုပ်တို့ update ရပ်ကွက်ထဲတွင်ဂါလီ(ဘေးတွဲပါသောပစ္စည်းတင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားသော စက်ဘီး) နင်းသူဖြစ်သောကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ နေညို မညို လေပြိုချင်သောသူ ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်းကြောင့်သူမတွင် ပိုက်ဆံ အတော်များများမရှိချေ။ ထို့ကြောင့် သူမထိုးသောနှစ်လုံးထီမှာ အစိတ်ဖိုးအာ ၊ငါးဆယ်ဖိုးအာ( အာဆိုတာ ဂဏန်းနှစ်လုံးကို ပတ်လည်ရိုက်ထိုးတာဖြစ်ကြောင်း နှစ်လုံးထီနှင့်နီးစပ်သော အပေါင်းသင်းများသိကုန်၏) ထိုးလေသည်။ သို့သော် သူမသည်အခြားအခြား အက်ဒိတ်ရပ်ကွက်ထဲက မအားသော အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးကြီးများကိုယ်စား နှစ်လုံးထိုးပေးခြင်း ၊ သူမထိုးပေးသော သူများမှ နှစ်လုံးပေါက်လျှင် မုန့်ဖိုးရခြင်းများရှိသည်။ နှစ်လုံးထီနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် နှစ်လုံးမမနှင့်တွေ့လိုက်ပါ ။ ချက်ချင်းပေါက် မပေါက်လျှင် ဂေါက်မည်။ ထိုသို့ နာမည်နှင့် နေသောသူလဲ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် …ရွှေရုပ် မလုပ်ခဲ့ဖူးသော နှစ်လုံးစကားများနှင့်ထိတွေ့ရတော့သည်။ “အဲ့ဂဏန်းလေး ထိုးပေးပါ … နှစ်သောင်းဖိုးတဲ့ ” “တဲ့ဆိုတော့ တစ်ယောက်ယောက်က ထိုးခိုင်းတာပေါ့ ဟုတ်လား…..” နှစ်လုံးမမစကားကြောင့် နောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိသည်။ အပေါက်မှာ မျက်နှာလေးသာဖော်ထားသော နှစ်လုံးထိုးခိုင်းသူအမကြီးက သူ့ကိုယ်သူလက်ညှိုးထိုးကာ လက်ခါပြပြီး ရွှေရုပ်ကို လက်ညှိုးထိုးကာ ခေါင်းညိမ့်ပြလေသည်။ထို့ကြောင့် “တဲ့ ဆိုတာ တည့်ဘဲ ထိုးမယ်။ ပတ်လည်မရိုက်ဘူး … ပြောတာ အဟီး… ” သူမသည် တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသလို ရွှေရုပ်ကို တစ်ဖက်ခြံထဲမှနေ ကြည့်ရင်း “ဒါ….ဒါဆို ဒါ မရွှေရုပ်ထိုးတာလား…” သူမသည် ရွှေရုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးကာ မေးသောကြောင့် ရွှေရုပ်က လက်ညှိုးကို ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပြန်ထိုးကာ “ရွှေရုပ်လား… မဟုတ်…..ဟင်…. ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် … ရွှေရုပ်ထိုးတာ နှစ်သောင်းဖိုးလုံးထိုးတာ…..အဟီး” မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောမလို့ဟာ နောက်ကွယ်က အမကြီးက ခေါင်းငြိမ့်ပြလေတော့ ဟုတ်တယ် ဖြစ်သွားသောအခါ နှစ်လုံးမမက မျက်စိအရောင်တွေ ပန်းထွက်သွားသည်။ “ဟယ်………… တစ်ခါမှ နှစ်လုံးမထိုးဖူးတဲ့သူက တည့်ဆော်နေပါလား…” သူမ၏ အပြောကြောင့် ရွှေရုပ်ရှက်သွားသော်လည်း ရှက်ရှက်နဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ရလေတော့သည် ။ပြောတဲ့ပုံကလဲ ဘာတွေမှန်းမသိ။ ထို့နောက် နှစ်လုံးမမ ဖက်ဖုတ် ဖက်ဖုတ်နဲ့ ပြေးသွားလေသည်။ (သူမပြေးတာ တစ်ကယ်ဖက်ဖုတ်တာနော် … ဖိနပ်က နောက်မြီးတစ်ခြမ်းမရှိတော့ဘူး ဘယ်ညာနှစ်ဖက်လုံးအဲ့တော့ ခြေအကျကဖိနပ်ရှိတော့ ဖက်… ပြီးတော့ နောက်က ဖနောက်နဲ့ ကျတော့ ဖုတ် …အောင်မလေးရှင်းပြရတာ လက်ညောင်းလိုက်တာ… ခဏကြာတော့ ဖက်ဖုတ်ဖက်ဖုတ်နဲ့ဘဲ ပြန်လာပြီး “ရော့ ကျမလဲ နှစ်ထောင်ဖိုးသူများဆီက ချေးထိုးလာခဲ့တယ်…” “ဟင်… ဟုတ်…ဟုတ်ပါပြီ … ဒါပေမယ့် အဲ့ဂဏန်းကို ရွှေရုပ်ထိုးတာ သူများတွေသွားမပြောနဲ့နော် … ခင်တဲ့သူဘဲ ပြောရတာ …. ဆရာအင်္ဂါဟူးသားက မကြိုက်ဘူးသိလား…” “အို …. အဲ့တာတော့ စိတ်ချ ဘယ်သူ့မှမပြောဘူး…. ကျမကို မယုံဘူးလား …. ” “ယုံ… ယုံတာပေါ့… ” “ယုံရင်ပြီးရော ….သွားမယ်…” ခုနကလို ဖက်ဖုတ် ဖက်ဖုတ်နဲ့ပြန်ပြေးထွက်သွားလေတော့သည်။ ထို့နောက်ရွှေရုပ်လဲ နှစ်လုံးလာထိုးတဲ့အမကြီးကို ဘောင်ချာပေးကာပြန်လွှတ်လိုက်ရတော့သည်။ဒါတောင်မှာလိုက်ရသေးသည်။ နောက်တစ်ခါ ရွှေရုပ်တို့ရပ်ကွက်မလာပါနဲ့လို့ ။ အခြားရပ်ကွက်မှာလဲ နှစ်လုံးရောင်းပါတယ်လို့ပေါ့။ ထို့နောက် ရွှေရုပ်ရဲ့ ကုန်မစုံတစ်စုံဆိုင်လေးကို ပြန်ထိုင်ရတယ် ။ အဲ့အချိန်မှာဘဲ အိမ်ဘေးက နှစ်လုံးမမက သူ့မ ခြံဝတွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ ရွာလည်လမ်းက လာသမျှသူတွေကို လက်ဆွဲပြီး အသံတိုးတိုး (လုပ်ပြီးပြောလဲ ကြားရတာဘဲလေ) ဖြင့် “အဲ့ဟာ ဟိုဘက်အိမ်ကအမထိုးတာလေ …သူက တစ်ခါမှ မထိုးဖူးဘူး … ဒါပေမယ့်နော် နှစ်သောင်းဖိုးတောင်ထိုးတာ …. ရေလည်ဆော်တာ ဆရာ အဲ့ဟာဘယ်သူ့မှမပြောရဘူးတဲ့ အမကို ကျမက အချင်းချင်းမို့ပြောတာ … ထိုးရင်ထိုးထားလိုက် … သူက နှစ်သောင်းဖိုးတောင်ထိုးတာ … ဒါဘဲနော် ဘယ်သူ့မှမပြောရဘူး ….” ထိုအမကြီးသည် ခေါင်းကိုညိမ့်ကာ ညိမ့်ကာ ပြုံးရွှင်ပြီး ပြန်ထွက်သွားလေသည်။ ထို့နောက် ရွှေရုပ်တစ်အံ့တသြဖြင့် ထွက်သွားသောအမကြီးကို ဆိုင်ပြင်ထွက်ပြီး ကြည့်တော့ ထိုအမကြီးကလဲ လမ်းမှာတွေ့သော လူတစ်ယောက်အား ရွှေရုပ်ဆိုင်ဘက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြကာ လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းထောင်ပြလေတော့သည်။ သွားပြီ ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်းတွေ အလွန်အလွန့်ကို ပျံ့နှံ့တာ မြန်လေစွ။အင်တာနက်တောင် ရွှေရုပ်တို့ အက်ဒိတ်ရပ်ကွက်လောက် မြန်မည်မထင် ။ နှလုံးမမသည်လည်းခြံပေါက်ဝ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ တွေ့သမျှ လူကို ခင်လို့ချည်းပြောနေတော့သည်။ သို့နှင့် နှစ်လုံးထွက်မည့်အချိန် ညနေသို့ရောက်လာလေတော့သည်။ ရွှေရုပ်သည်လည်း ထိုဂဏန်းအားထွက်စေချင်တော့သည်။ မဟုတ်လျှင် အက်ဒိတ်ရပ်ကွက်မှ ဝေဖန်ချက်များ ရွှေရုပ်အတွက်ဖြစ်ကုန်တော့မည်။ ညနေလေးနာရီခွဲပြီးသော် … “ကုန်ပြီ…. ဟင် ရေထဲချတာမှ ပလုံဆိုတာအသံမြည်ဦးမယ်.. ခုတော့ ဘိုးတော်ပေးတဲ့ဂဏန်းကို ဖွားတော်က မလိုက်တာ ကုန်ရော…. ဘာ အင်္ဂါဟူးလဲ ….ဘယ်က အင်္ဂါဟူးလဲ … ဒီရပ်ကွက်လာကြည့် ဖင်ပါပူးသွားမယ်…. တောက်….” ထိုသို့ လျှင် “ တောက် …. တဲ့ …. ကျွတ်…. ကျွဲ့”အာမေဋိတ်ပေါင်းစုံ ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးဆူညံနေချိန်မှာတော့ ရွှေရုပ်ရဲ့ ဆိုင်လေးကိုပိတ်ကာ အိမ်ထဲမှာ ကာရာအိုကေ ကို ဘော်လူး အမြင့်ဆုံးထားပြီးအော်လိုက်တော့သည်။ “လူမွဲတွေမှ မနှေးခတ်မည် ခွေးဖြစ်တော့မည်… ဟေ့ ကျမ်းကျမ်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ချဲထီကိုထိုးမည်….”Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ ရွှေရုပ်
Posted on 1/26/2013 by
· အမေသည် ဤပက်လက်ကုလားထိုင်မှ ထရသည်မှာ အလွန်ပင် ခက်ခဲလှပေသည်။
· ကျွန်မအမေ့ကို ဖေးကူဖို့ပြင်မိသည်။ · “ရတယ် သမီးနေနေ …အမေထနိုင်ပါတယ်…”
· ကျွန်မကူ၍မရသောအခါ သက်ပြင်းကိုသာ ခပ်ရှည်ရှည်ချဖြစ်သည်။ “အမေ” ကျွန်မအမေသည် သူထိုင်လျှင် ထိုပက်လက်ကုလားထိုင်မှာဘဲထိုင်သည်။ ထရသည်မှာလဲ တော်တော်ခက်ခဲပေမယ့် ထိုခုံလေးကို အမေ တော်တော်နှစ်သက်ပါသည်။ အမေသည် အသားပြုတ်ကြော်များလုပ်ကာ ထိုကုလားထိုင်တွင် ထိုင်၍ ရေနွေးကြမ်းနှင့်မြည်းရသည် မှာ အမေ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုဖြစ်မည်ထင်သည်။ · ကျွန်မအရင်တုန်းကလို အမေနှင့်နေ့တိုင်းအနေဖြစ်သည်မှာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ။ ကျွန်မရန်ကုန်မြို့ထဲရှိ အလုပ်(ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ)တစ်ခုမှာ လုပ်နေသောကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။ ကျမဘွဲ့ရပြီးသည်အထိ အမေနှင့်အဖေသည် ကျမအား ဘာအလုပ်မှမခိုင်း အိမ်တွင်သာကူစေခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် ကျမလူတိုင်းနှင့် ရင်ဘောင်တန်းကာ အလုပ်လုပ်လိုလှသည်။ အိမ်မှာနေရသည်ကို ကျမအတွက် ကျမ၏ အရည်အသွေးမှိန်သည်ဟုခံစားမိကာ အပြင်အလုပ်လုပ်ရန်အားသန်မိတော့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျမအလုပ်ကာ ရန်ကုန်အလုပ်နှင့်မှော်ဘီအိမ်ဝေးသည်ဟူသောအကြောင်း ပြချက်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ထဲတွင်ပင်နေကာ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်သည်။ စနေ၊တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်များသာ အိမ်သို့ပြန်ကာနေလေ့ရှိသည်။ · ကျမအလုပ်ပိတ်ရက် အိမ်ပြန်လျှင် အမေသည် ကျမကြိုက်တတ်သော ဟင်းများကိုချက်ကာ ခြံဝတွင်ထွက်ကြိုသည်။ ကျမ အမေ့ကို အလုပ်မှ ပျော်စရာ၊စိတ်ညစ်စရာများ အလုပ်အတွေ့အကြုံများကို ပြောပြသည့်အခါ အမေနားထောင်၍ အကြံကောင်းများပေးသည်။ အများဆုံးကတော့ “အလုပ်ထွက်ပြီး အိမ်မှာလာနေ”ဆိုတာ များသည်။
· ကျမအတွက်တော့ အိမ်နဲ့ ဝေးဝေးနေလျှင် အမေကျမကိုပိုချသ်သယောင်ခံစားမိသည်။ ဆူလဲမဆူ ငေါက်လဲမငေါက် ၊ ကျမအိမ်ပြန်လျှင် ကျမကြိုက်တာတွေချက်ကျွေး ၊ ကျမပြောတာတွေ နားထောင်ကာ အမေပြုံးကာနေတတ်သည်။ ကျမအလုပ်စ၀င်ဝင်ခြင်းတွင် အမေသည်ကျမ၏အိပ်ယာကို(အိမ်ပေါ်တပ်မှ) ဖုန်မတက်အောင် ကျမနေစဉ်အတိုင်းသန့်ရှင်းထားပေးသည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် အမေအပေါ်ထပ်သို့မတက်နိုင်တော့။ ကျမအိပ်ယာကို တစ်ပတ်တစ်ခါ ကျမပြန်လာမှ ခင်းကာ ကျမအိပ်ရသည်။ ကျမအိမ်ပြန်လာလျှင် ကျမနှင့်အမေတစ်နေကုန်ထိုင်ကာ စကားပြောကြသည်။ အမေပြောသည့်အကြောင်းများမှာ အဖေနှင့် ကျမအကိုအကြောင်း တွေသာဖြစ်တော့သည်။ သို့ရာတွင် အမေက အမှန်စစ်စစ် နားထောင်သူသာဖြစ်သည်။ ကျမ မကုန်နိုင်သော အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်း၊ ကျမအမေ့အတွက် သတ်သတ်ဖတ်ကာ ကျက်လာသည့် ဟာသဇာတ်လမ်းလေးတွေအကြောင်းအား အမေသည်ထိုင်နေကျပက်လက်ကုလားထိုင်လေးတွင် ထိုင်ကာ သူမကြော်ထားသောအသားကြော်များကို ရေနွေးကြမ်းနှင့်မြည်းရင်း ပြုံးရွှင်ကာ နားထောင်လေ့ရှိသည်။
· “သမီးလာ ထမင်းကြော်စာ်း…”
· “ဟဲ့ ထမင်းကြော်လာစာားလို့ပြောနေတယ်…”
· ကျမအတွေးတို့သည် ပြတ်တောက်ကာ အမေခူးပြီးသားပန်ကန်ရှေ့တွင် အဆုံးသတ်၏။ အမေဆနွင်းမှုန့်နှိုင်းခြင်းနှင့်ကြော်ထားသော ထမင်းကြော်ဝါ၀ါလေးနှင့် ငပိကြော်က အလွန်ပင် ခံတွင်းတွေ့လှပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျမ
· “အမေ ဒီအိမ်နဲ့ ခြံကို ရန်ကုန်ရွေ့လို့ရရင်ကောင်းမယ်…”
· “ဟီး…. အဲ့ဒါဆို အမေ့လက်ရာ နေ့တိုင်းစားလို့ရပြီနော်..”
· “အမယ်ညည်းက ကျုပ်ကိုပြုစုဖို့ မစဉ်းစားဘူး ခိုင်းစာချင်နေတာ”
· ကျမအမေ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ရီလိုက်ပါသည်။ အမေအသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်လာတာ တစ်လနီးပါးရှိပြီ။ အမေက အရင်ဘ၀ကဆုတောင်းကောင်းခဲ့သည်ထင်၏။ ဆံပင် သိပ်မဖြူသေးပါးရည်သိပ့်မတွန့် သေး၊ ချောဆဲလှဆဲ ကျက်သရေရှိဆဲပင်။ အမေသည် အပြင်ကိုမထွက်ဖြစ်တော့ အိမ်ထဲနှင့် ခြံထဲတွင်နေကာ အိမ်အလုပ်လုပ်လိုက် ခြံထဲထိုင်လိုက်နှင့်အချိန်ကုန်စေတတ် သည်။ ကျမလာမှ လမ်းထိပ်ဈေးလေးသို့ ကျမဖေးကူမှုနှင့်အတူ ဈေးဝယ်ထွက်တာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အမေသည် အိမ်နီးနားချင်းနှင့် စကားပြောဆိုတာအပြင် ကျမနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းသည်သာလျှင် သူမ၏ အပြင်လောကနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ · “အမေကြီး ”
· “သမီးနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသွားဖူးရအောင်…”
· “အိုအေ….. ငါအသက်ထွက်နေပါဦးမယ်…”
· “ရင်ပြင်ထိကားရောက်ပြီ …ကားခေါင်းခန်းကသွားရအောင် သမီး အိန္ဒိယကပြန်လာရင် အမေနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းသွားမယ်လေ…”
· “သွားပါဘူး တီဗီကဘဲ ဖူးလိုက်တော့မယ်”
· “မရပါဘူးနော် သမီးပြန်လာရင်တော့ တူတူသွားရမယ်…အမှန်ဆို အခုသွားရမယ့်ခရီးကို ဘယ်လိုသွားရမလဲမသိဘူး… နှစ်ဆယ့်တစ်ရက်တောင်ကြာမှာဆိုတော့ သမီးအမေနဲ့လဲ အဲ့လောက်အကြာကြီး မခွဲနိုင်ဘူး…အဲ့မှာဆို ဖုန်းတောင်ဆက်ချင်မှဆက်လို့ရမှာ….”
· “သွားပါ သမီးရယ်… သမီးက ကုသိုလ်ထူးလို့ ဘုရားပွင့်တဲ့ နေရာရောက်တာ အမေ၀မ်းသာတယ်….”
· ကျမသွားရမည့်နေ့မှာ အမေက ခေါင်းအုံးအိပ်တဲ့သဘက်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါ သည်။ အမေကတော့ပြုံးနေဆဲ ။ ကျမအမေနဲ့ အဖေ့ကိုကန်တော့ပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ အိမ်နီးနားချင်းများကို အမေ့အားကြည့်ပေးရန်၊စကားပြောပေးရန် ပတ်ကာမှာခဲ့သေးသည်။ ကျမအဖေက နေ့လည်ဆို သူ၏ အလုပ်များနှင့်အပြင်ထွက်သည့်အခါ အမေတစ်ယောက်တည်း အိမ်တွင်ကျန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်။ ထို့အပြင် ကျမ၏ချစ်သူကိုလည်း အမေ့အားဖုန်းဆက်ပေးရန် အထပ်ထပ်မှာကာ ဘုရားပွင့်ရာ ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ “လီတာ(ခေါင်းဆောင်) အနေဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ခရီးထွက်ခဲ့ပါသည်။ · ကျမအိန္ဒိယတွင် အမေ၏ဟင်းလျာများကို လွမ်းလှသည်။ အမေ့အပြုံးတွေကိုလဲ လွမ်းလှသည်။ စနေလဲမတွေ့ရ တနင်္ဂနွေလဲမတွေ့ရ ။ အရင်တိုန်းကဆို နေ့တိုင်းရုံးမှ ဖုန်းဆက်နေကျ အမေဘယ်လိုများနေလဲဟုစိတ်ပူမိသည်။ ကျမသွားပြီး ဆယ်ရက်အကျော်မှာတော့ အိန္ဒိယရဲ့ ပီစီအို ကနေဖုန်းခေါ်တော့
· “မေကြီး …”
· “သမီးအခုဘယ်မှာလဲ ထမင်းစားပြီပြီလား နေကောင်းလား..”
· “သမီးခုလေ ဘုရားက သူ့မယ်တော်နတ်သားကို တရားဟောာပြီး တာဝတိံသာကနေ ခြေပြန်ချတဲ့ နေရာကိုရောက်နေတာ၊ ထမင်းစားပြီး ပြီးပြီ မေကြီးရောနေကောင်းလား”
· “အင်း ကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် ညည်းကို အရမ်းလွမ်းတယ်…နောက်မသွားနဲ့နော်…”
· ကျမ မျက်ရည်ကြိတ်ကျမိသည်။ · “ဟုတ် သမီးလဲ အမေ့ကို အရမ်းလွမ်းတယ် … အမေ့အတွက်ရော အဖေ့အတွက်ပါ လက်ဆောင်တွေဝယ်ထားတယ်…”
· “သဘက်လေ အများကြီးဘဲ…”
· “ငါက လျှောစောင်လိုချင်တာ ”
· “ဟုတ်… ၀ယ်ပေးမယ် နေကောင်းအောင်နေနော်… သမီးလေးရက်နေ့ပြန်ရောက်မယ်..”
· “ဟင် အကြာကြီးလိုသေးတယ်…”
· “ခဏလေးပါအမေရယ် နေကောင်းအောင်နေနော်… သမီးဖုန်းဆက်လို့ရရင်ထပ်ဆက်မယ်…. အဖေကြီးရော….”
· “နင့်အဖေ စာပေဟောပြောပွဲသွားတယ်….”
· “ဟုတ် ဒါဘဲနော်….”
· ဒါပါဘဲ အမေအရမ်းလွမ်းနေတာ ကျမခံစားမိပါသည်။ ဖုန်းချပြီး ကျမမျက်ရည်များ လှိမ့်ထွက်လာသည်။ ကျမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလဲချလိုက်မိသည်။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် အိမ်ကနေဘဲ ရုံးတက်တော့မည်ဟု ၊ကားစီးတာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းပေါ့။ အရမ်းလွမ်းတယ် အမေရယ်။
· ကျမအိမ်ပြန်ရမယ့်ရက်တွေ လက်ချိုးရေနေမိသည်။ ကျမရန်ကုန်ပြန်ရောက်သည့်နေ့ ကျမချစ်သူလာကြိုမည်ဟု ကျမနှင့်အတူ ကျမကို လီတာ(ခေါင်းဆောင်) အလုပ်သင်ပေးသည့် သူငယ်ချင်းမလေးကပြောသည်။ ချစ်သူက ရန်ကုန်ရှိရုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီး လေယာဉ်ဆိုက်မည့်အချိန်မေးသည်တဲ့။ ကျမရောက်ရောက်ချင်း အိမ်ပြန်ဖို့စဉ်းစားထားသည်။ အမေ့အား ကျမ၏ အတွေ့အကြုံသစ်တွေအကြောင်း ၊ ကုလားလူမျိုးတွေအကြောင်းပြောချင်၏။ ကျမရိုက်လာတဲ့ အလှဆုံးဓါတ်ပုံတွေကိုလည်းကောင်းပြချင်၏။ အမေ့အတွက် ၀ယ်လာသော လက်ဆောင်များကိုလည်းကောင်းပြကာ ပေးကာ အမေပြုံးနေတာကို ထိုင်ငေးချင်သည်။
· ကျမလေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းတော့ ကျမချစ်သူ လာကြိုသည်ကို နွေးထွေးစွာ ခံစားမိသည်။ ကျမချစ်သူ ကျမရဲ့ luaggeကိုသယ်ကာ · “အိမ်ပြန်ကြမယ်နော်ချစ်…”
· “ဟင်…. ဟုတ်…..”
· ချစ်သူကတော်သည်ကို ကျမစိတ်ထဲမှ အမှတ်ကြိတ်ပေးမိသည်။ ကျမလဲ အိမ်ပြန်ချင် နေသည်မဟုတ်လား။
· “ လွမ်းတာပိုပါတယ် မောင်ရယ်…. နောက်ဆို အဲ့လိုခရီးအကြာကြီးမသွားတော့ဘူး…”
· ကျမစိတ်ထဲအမိမြန်မာမြေကို ခြေပြန်ချရသည့်အတွက်၊ ကျမချစ်သူ လာကြိုသည့်အတွက် အမေ့ကိုတွေ့ရမည့်အတွက် ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်မိနေသည်။
· “ချစ်…. စိတ်ထဲရှင်းရဲ့လား…”
· ကျမချစ်သူသည် စိတ်အိုက်သော ၀မ်းနည်းသောအမှုရာများဖြင့် သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ
· “ဒီစကားကိုမောင်မပြောချင်ဘူး မပြောလို့လဲမရဘူးနားထောင်နော်…”
· ကျမမောင့်ကိုပြုံး၍ ကြည့်မိသည်။ မောင်မျက်နှာမကောင်းပါ။ ဒါပေမယ့် မောင် စနေပြန်ပါပြီဟု ခံစားမိသည်။ သို့သော်………
· “မဖြစ်နိုင်တာ မညာပါနဲ့…”
· ကျမချစ်သူသည် သူ့၏လက်ထဲမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလေး ကျမအားပြသည်။ · “ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်ခင်ဝေအား ရည်စူး၍…..”
· ကျမဆက်မဖတ်နိုင်တော့ ကျမပါးစပ်က မယုံဘူးဟု အခါခါအော်နေပေမယ့် ကျမမျက်ရည်တွေ ရွှဲနေပြီဖြစ်သည်။ ကျမမငိုပါဘူး သူ့ဘာသာသူ မျက်ရည်က လှိမ့်ကျနေတာ။ ကျမငိုနေသည့်ကြားက ကြားရတာ အမေကို မနေ့က သဂြိုလ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ရက်နေ့က ဆုံးသွားတာဖြစ်ကြောင်း ၊ အမေအသက်ထွက်သွားပုံမှာငြင်သာကြောင်း ထို့နောက် ကျမဆက်မကြားနိုင်တော့ပါ။ ကျမအမေ့တွက် ဘာလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားမိသည်။ ကျမအမေ့ကို မမြင်ရတော့ပေမယ့် အမေ့ကိုမြေမြုတ်လိုက်သည့်နေရာကို သွားလို့ရသည်။ ပြီးရင် ကျမဘုရားပွင့်သည့်နေရာမှာ ပြုလာသည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို အမျှဝေလို့ရသည်။ ထိုအခါမှ စပြီး ကျမငိုပါသည်။ ကားပေါ်မှာ၊ ကျမချစ်သူဘေးမှာ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုမိပါတော့သည်။ သမီးကိုတောင် မစောင့်တော့ဘူးလားအမေရယ်…………………
· ကျမအိမ်ရှေ့တွင် ကုလားဖျင်းထိုးထားသည်။ ကျမအားခြံဝတွင်လာကြိုသည်မှာ အမေ့ရဲ့ ညီမတွေသာ ။ ကျမအဖေနှင့် အမေအခန်းကိုပြေးတော့ အဖေက အိပ်ယာပေါ်တွင် ဟိုဘက်လှည့်ကာ အိပ်မောကျနေသည်။ · “အမေဘယ်မှာလဲ….. အမေ… အမေဘယ်မှာလဲ…..”
· ထိုအချိန်တွင် ကျမအကိုက ကျမအား အိမ်ရှေ့ခြံထဲသို့ခေါ်ကာ
· “နင့်ကို မငိုနဲ့လို့မပြောဘူး ၊အမေက ငါ့လက်ထဲမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးထွက်သွားတာ၊ အမေရင်ဘတ်အောင့်တယ်ပြောပြီး ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ထိ မိနစ်နှစ်ဆယ်ဘဲကြာတယ် … ငါတို့လဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး… အမေ့ကိုဆေးရုံကိုခေါ်အသွား လမ်းမှာ ဆုံးတာ အမေတရားမှတ်ရင်း ဆုံးတာ …သေတာကိုပြန်ရှင်လုပ်လို့မရဘူး သီရိ…. အဖေကျန်သေးတယ်….. ငါတို့အဖေအတွက် လုပ်ပေးရအောင် …သူအရမ်းနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်….”
· ကျမငိုမည့်အသံတွေတိတ်သွားသည်။ ဟုတ်တယ်… ဖေကြီးကျန်သေးတယ်… ဒါပေမယ့် ကျမဆက်မေးမိသည်။ · “အမေခုဘယ်မှာလဲ ဘယ်မှာသဂြိုလ်လိုက်လဲ…”
· “မနေ့က မီးသဂြိုလ်လိုက်တာ … နင့်ကိုပြဖို့ ငါမီးခိုးခေါင်းတိုင်က ထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာ ရှိတယ်…” · ဒါပါဘဲ ကျမဘယ်မှပြေးငိုလို့မရတော့ပါဘူး။ မိဘရှိတုန်းပြုစုသေမှငိုမနေနဲ့ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတရားကိုပြန်ကြားမိသည်။ အမေရယ်…. ဘာကိုမှပြောမသွားဘူး …… ကျမအိမ်ထဲပြန်ဝင်လာမိသည်။ အသံမထွက်ဘဲမျက်ရည်တွေ ကျနေသည်။ ဧည့်ခန်းမှ နာရေးပရိတ်သတ်ကို ဖြတ်ကာ ကျမအမေရဲ့ ဓါတ်ပုံချိတ်ထားရာသို့ တစ်လှမ်းချင်းသွားနေမိသည်။ · “အမေ…”
· ဓါတ်ပုံထဲကအမေသည် ကျမကို ပြုံးပြနေပါသည်။ အမေအပြင်မှာ မရှိတော့ပေမယ့် အမေရှိနေပါသေးသည်။ အမေ့မေတ္တာသမီးတွက် ရှိနေပါသေးသည်။ ကျမအမေရဲ့ဓါတ်ပုံကို မျက်ရည်တွေကြားက ပြန်ပြုံးပြမိပါသည်။ သမီးအမေ့ကို အရမ်းချစ်ပါတယ် အမေရယ်။
· ဒီဝထ္ထုလေးက အမေဆုံးပြီးတုန်းကရေးထားတာပါ ။ မျက်ရည်တွေနဲ့ရေးထားတဲ့စာကို ဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းမိမှာမို့ သိမ်းထားတာကြာပြီ။ ဒီနေ့အမေများနေ့အတွက် ကျမအမေ့တွက်ခံစားရတဲ့ အကြောင်းလေး အမှတ်တရပါ။ ကျမအမေ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်နေရင် ကျမကျေနပ်ပါပြီ
· ရွှေရုပ် Read article
update အကယ်ဒမီ (၂၀၁၁)
Posted on 12/30/2012 by
Update အကယ်ဒမီပွဲ (၂၀၁၁)
“ဟင် ဒါဆိုပျိုးပျိုးပျက်ပျက် ဒိုဒိုးဒန့်ဒန့်တွေ ငါတွေ့ရတော့မပေါ့…”
သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုးသည် သူ့၏ အားကစားရုံမှာ ယခင့် ယခင်က ရှိုးပွဲများမကျင်းပဖူး သည့်အလား နတ်ပျိုလေးတစ်ပါးလို ရင်ခုန်သွားသည်။ သူ၏အပြောကို နေပြည်တော်တွင် အကယ်ဒမီကွင်းစောင့် ဘိုးဘိုးလေးက ရယ်လေတော့သည်။ ထို့အပြင်
“ပျော်မနေပါနဲ့ နားတွေညီးလို့ပါ ဘိုးဘိုးရယ်…ကဲ ..ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ် တော်ကြာဖလိုက်မမှီဘဲ နေဦးမယ် ”
“ဟင်….. မင်းကဖလိုက်နဲ့ပြန်မှာလား ….သတိလဲထားဦးနော်… တော်ကြာ…”
သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုး သတိပေးသည့်စကားကို နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးမှ “ အိုဒါများဘိုးဘိုးရယ် ကျွန်တော်ဘာကြောက်စရာလိုလို့လဲ … မြန်မာနိုင်ငံက လေယာဉ်မှူးတွေ တော်ချက်က အံ့မခန်းဘဲကို… လေယာဉ်တစ်စီးလုံး မွမွကြေအောင်မီးလောင်တာ အပျက်အစီးက 1%လောက်ဘဲ ရှိတာ …. ပြီးရင် ဘာမှမဖြစ်ရင် အလျော်တောင်ပေးသေး ..ဟေးဟေး… ..ဒါပေမယ့် ဘိုးဘိုးရယ် စိတ်မပူပါနဲ့ ….အဲစီးဒန့်ဆိုတာ တစ်သက်မှာ တစ်ခါဘဲဖြစ်တာပါ…”
“ဘာဘဲပြောပြောမပြန်နဲ့ ဦးဟာ… ငါနဲ့အတူ အကယ်ဒမီပွဲအားပေးဦး..”
နေပြည်တော် ဘိုးဘိုးလေးခေါင်းကိုတွင်တွင်ကုတ်လိုက်သည် သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုးက သူ့ထက်ဝါကြီးဆိုတော့လဲ အရိုအသေပေးသည့်အနေဖြင့်နေရပေဦးမည်။
“ဒါနဲ့ ဒီနေ့ တစ်ပြေးနေတာ ဘယ်ကားလဲကွ..”
နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးသည်သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုး၏ စကားကိုစိတ်ဝင်စားရန်ကောအကြည့် ဖြင့်ကြည့်ကာ
“ခဏတစ်ဖြုတ် အမှောင်လုံးများ ..ကားလေ … မင်းသားရော မင်းသမီးရော ဇာတ်ညွှန်းကော အဲ့ကားက ရမှာ”
“သိဆို ခုရေးနေတဲ့ရွှေရုပ်က အကယ်ဒမီပွဲပြီးမှ စိတ်ထဲထင်တာတွေ လျှောက်ရေးတာကိုး…..အဲလေ ….ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အကယ်ဒမီပွဲလုပ်သက်ရင့်လာတော့ မှန်းတတ်နေတာပါ…”
မင်းသမီးရွှေရုပ်သည် အကယ်ဒမီဝန်းထဲအ၀င်မှာပင် တရုတ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်“ရမ်းပြင်”နဲ့ ခလုတ်ခဏခဏတိုက်နေတော့သည်။
“မာမီ…. မာမီကလဲ …လမ်းလျှောက်ရင်ဘေးကကပ်လျှောက်လို့ပြောရဲ့သားနဲ့ အခုပွဲက မာမီပွဲလား မီး ပွဲလား … ပြီးတော့ မာမီနော် ၀တ်လာတာက အောကြိုက်ကြီး…”
“အို….မီးကလဲ မာမီက မီးကိုလမ်းရှင်းပေးတာ မီးမကြိုက်လဲ ဘေးကလျှောက်မယ်နော်…… ”
ထိုအခါမှ ခဏတဖြုတ် အမှောင်လုံးများဇာတ်ကားမှ တစ်ပြေးနေသော မင်းသမီးရွှေရုပ်ကို ကင်မရာမန်းတွေ ရမ်းချင်တိုင်းရမ်းလို့ရသွားလေတော့သည်။ (ဓါတ်ပုံကိုကို မီးကုန်ယမ်း ကုန်ရိုက်တာကိုပြောပါတယ်)
ထို့ပြင် အကယ်ဒမီပွဲအလှကို ရင်ခုန်စွာကြည့်နေတဲ့ ဘိုးဘိုးနှစ်ဦးမှ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုးမှ
“ဟယ် ….ဟိုဟာ ဘာလဲ …. အမေဇုံတောထဲက လွှတ်လာတာလား”
နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးသည် ပါးစပ်ဟကာ အအံ့သြကြီး အံ့သြသွားခဲ့ရသည်။ ဟုတ်ပါရဲ့ကြည့်စမ်းပါဦး အဓိကတွေသာ အဓိကထားတာ အောင်မလေး…အဲ့လိုသာ အဓိမကလို့ကတော့ …ဟင်း…. အံ့သြစရာကြီး ဒီလောက်အေးနေတာကို သူမို့ အသားဖော်ပြီးပြောလိုက်ချင်ဘူး တစ်နှစ်မှ ဒီလိုမမြင်ဖူး မြန်မာ့အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲတဲ့ ပွဲတက်ဝတ်စုံက လူရိုင်းတောထဲကလို …..လူရိုင်းတောထဲမှတော့ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ကောင်ရဲ့ သားရေကိုဖုံးမှာပေါ့ ခုတော့ ရွှေရောင်ပန်းခက်ကို အဓိကကို ဖုံးထားလေရဲ့ဗျာ… အမြင်ဆိုးပေမယ့် လွှတ်ကြည့်လို့ကောင်းဗျား….
နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးက လူငယ်မို့ မျက်စိအစာကို အငမ်းမရကျွေးလိုက်လေတော့သည်။ ထိုအခါသုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုးမှ
“ငါမေးတာဖြေဦးလေ ဘိုးဘိုးလေးရယ် …”
“ဟို…ကြည့်ကောင်းလို့ပါ အဲလေ… သူက ခေတ်ရေစီးကြောင်းအင်္ကျီလို့ခေါ်ပါတယ် ဘိုးဘိုးကြီးရယ် …လူရိုင်းမဟုတ်ပါဘူး…”
“ဟယ် ဟိုမှာဟေ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲကို ရေလာချိုးတဲ့သူတွေ…”
နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးကသုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုးစကားကို အော်ရီတော့သည်။ “ဟားဟား … ဘိုးဘိုးကြီးရာ …အဲ့ဒါ ပွဲတက်ဝတ်စုံပါဗျ… ”
“သြော်…. ပွဲတက်ဝတ်စုံကလဲ …. ထမီရေလျားကြီးဘဲ ..ဒါဆို ဟိုဘက်ရပ်ကွက်ထဲက ကောင်မလေးတွေ ပွဲတက်ဝတ်စုံနေ့တိုင်းဝတ်ပြီးရေချိုးကြတာပေါ့…. ဟင်း……..”
နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးသည် ဘာမှရှင်းပြမနေတော့ … ထမီရေလျားတစ်ဖြစ်လဲ ပွဲတက်ဝတ်စုံအားလည်းကောင်း ၊ အချွန်အတက်တွေနဲ့ ပွဲတက်ဝတ်စုံအားလည်းကောင်း ထို့ပြင် နားကပ်နားဖက်နဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားကြီးတစ်ဦးအား အံ့သြစွာဖြင့်လည်းကောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကင်မရာမန်း ၊သတင်းထောက်များ၏ ဆပ်ပြာသည်လင်ပျောက်မှုအားလည်းကောင်း သဘောကျကျနှင့်ငေးကြည့်နေမိတော့သည်။ ဒါကို သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုးမှ
“ဟယ်… ဟိုသူငယ်ကျတော့လေးစားထိုက်တယ် မြန်မာတိုက်ပုံနဲ့ ဆံပင်ကိုလဲ စေတီပုံတည်ပြီး ရွှေချထားသေးတယ်…”
“ဟားဟား… ဘိုးဘိုးကြီးရယ် ဒါက ခေတ်ဒီဇိုင်းဘဲ ၀မ်းဝေးလို့ခေါ်တယ်…”
“သြော်…… တူးဝေးဆိုရင် စေတီနှစ်ဆူ ဖြစ်နိုင်တယ်…”
ကိုယ်သန်ရာကိုယ်ဆွဲတွေးရင်း မင်းသမီးရွှေရုပ်အား အင်တာဗျူးနေရာသို့ မျက်လုံးရောက်မိကြတော့သည်။
“ရွေှ့ရုပ်ကတော့ အကယ်ဒမီမရှိလဲရင်ခုန်ပါတယ် …ရင်မခုန်ရင်သေမှာပေါ့နော်… ”
“ခဏတစ်ဖြုတ် အမှောင်လုံးများဇာတ်ကားမှ ဇာတ်ညွှန်းဆုကိုရရှိသွားပါတယ်… ရရှိတဲ့သူကတော့ ဇွတ်ရေးနှင့် ရမ်းတုတ် တို့နှစ်ယောက်ဘဲဖြစ်ပါတယ် …”
အခန်းနားတစ်ခုလုံး ဝေးကနဲအော်လိုက်ကြသည် နဂိုကတည်းက ထိုနှစ်ယောက်ရမည်လဲမှန်းထားကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆုရသည့်သူနှစ်ဦးမှ တစ်ဦးသည် အသက်ငယ်သေးသည် အသက်သုံးဆယ်ခန့်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ယောက်စင်ပေါ်ရောက်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားအပြောတွင် အသက်သုံးဆယ်အရွယ်ခန့်ပုဂ္ဂိုလ်မှ “ဒီကားကို ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ်ကတည်းက အသည်းထဲစွဲနေပြီး အဲ့အချိန်ထဲက သန္ဓေ တည်လာခဲ့တာမို့ ဆုရတာကို ကျွန်တော် အလွန်ဝမ်းသာပါတယ်…”
သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုးမှ မနေနိုင်ဘဲ “ဟေ့ရောင် ဘိုးဘိုးလေးမင်းကြည့်စမ်း အဲ့တစ်ယောက် အလွန်ဆုံးရှိမှ အသက်သုံးဆယ်ကျော်ပေါ့ … ဒီဇာတ်ကားကို သူလွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ်ဆိုတော့ သူ အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်ကတည်းက ဇာတ်ညွှန်းရေးစားလာတာလား..”
အဖြေရခက်သည့်မေးခွန်းကြောင့် နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးလေးသည် “သိပါဘူးဗျာ”ဟုသွက်သွက်ဖြေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကင်မရာကမင်းသမီးရွှေရုပ်ဆီကို ချိန်ရွယ်ထားသည်။ ပြီးတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်နေတာလဲဖြစ်သည်။ ဒါကိုမင်းသမီးမှ သတိမပြုမိ ဘေးမှာရှိသောတစ်ယောက်နှင့် တွေ့ကရာမင်းသမီးအကြောင်းတွေအတင်းတုတ်ရင်း နှပ်ချေးဖတ်ကလော်ကာ လက်ညှိုးနှင့်လက်မကြားထဲထည့်လုံးနေတော့သည်။ ထို့နောက် “ရွှေရုပ် ဟိုမှာနင့်ပုံ …”
ရွှေရုပ်လန့်သွားသည်။ မလန့်ခံနိုင်ရိုးလား ။ သူမ နှပ်ချေးဖတ်ခွာနေသည်ဘဲ ထိုနှပ်ချေးဖတ်ကို လန့်သွားရင်း ဘေးမှာရှိသော မင်းသမီးအား ခွံ့လိုက်လေတော့သည်။ မဟုတ်ရင် ရွှေရုပ်နှပ်ချေးဖတ်ခွာတာ တစ်နိုင်ငံလုံးသိရချည်ရဲ့…
“ဒီနှစ်ကိုယ်ရမယ်ထင်တယ် ..စင်ပေါ်တက်ရင် မရိုင်းအောင်လို့ပါ နို့မဟုတ်လို့ကတော့ …အဟင်းဟင်း …. ဟိုတစ်ယောက်ထက်ကို သာအောင်ဝတ်ဦးမှာ…”
ဘေးမှမင်းသမီးသည် ရွှေရုပ်ပြသောနေရာအားလိုက်ကြည့်သည်။ ထို့အတူ ဘိုးဘိုးနှစ်ဦးသည်လဲ လိုက်ကြည့်မိသည်။ ထို့ပြင် ပါးစပ်တွေမှလည်း တညီတည်း
ထို့နောက် ရွှေရုပ်သည် ဘေးကမင်းသမီးအား “ဟုတ်တယ် သူများကိုလက်ခုပ်တီးပေးရုံ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံရုံလာတဲ့ ဟာတွေ နင်ကြည့်ပါလား အကုန်လုံး ဟာတာလွတ်ထွက်တွေချည်းဘဲ… အဟီးဟီး…”
“ဟဲ့ရွှေရုပ် သူများအတင်းပြောနေတာနင့်ကိုခေါ်ကုန်ပြီ… နင်ဆုရပြီဟဲ့ …”
ရွှေရုပ်သည် စတိတ်စင်ရှိရာသို့သွားရန်ထရပ်လိုက်စဉ် “၀ုန်း…၀ုန်း…၀ုန်း..”
အလုံးပေါင်းများစွာကင်မရာတို့က မျက်နှာကို ခိုက်မိတော့မတတ်တစ်ဖျတ်ဖျတ်ရိုက်ကြလေသည်။ ကင်မရာမန်းတွေလဲ သူတို့ကိုယ်တိုင် တီင်္ဗီမှာပါချင်သည်ထင်၏ ။ ဇွတ်ကို ဆပ်ပြာသည်လင်ပျောက်တော့သည်။ ကင်မရာတွေပေါ်ကင်မရာတွေဆင့်ကြသည်။ သူတို့ရိုက်သည့်ပုံ ဘယ်နေရာမှာ ကောင်းမည်နည်း။ ပုံထဲမှာ ကင်မရာတွေဘဲမြင်ရတော့မပေါ့။ မဟုတ်ရင်လဲ ရွှေရုပ်ခေါင်းဘဲပါမည်ပေါ့။ စပ်စလူးစိန်ကြလေခြင်းနော်။
“ရွှေရုပ်သည် သူ၏ကျရာဇာတ်ရုပ်တွင် အမှောင်ထဲ၌ အကန်းနှမ်းစမ်းသလိုတွားသွားခြင်း၊ လက်နိုပ်ဓါတ်မီးအလင်းရောင်အား ပိတ်ချင်လိုသောအခါ ရှိသမျှ အ၀တ်များဖြင့်အုပ်ခြင်း တွေ့ကရာကြွက်တွင်းထဲ ဇွတ်ကနဲထိုးပြီး ပျော်သွားသည့်အချိန် အမှုအယာအပြင် …. ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးတွင် မှောင်မှောင်မဲမဲထဲ အပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ယခုနှစ် အကယ်ဒမီဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်…”
ခဏတစ်ဖြုတ် အမှောင်လုံးများ ဇာတ်ကားကို ပြသတော့သည်။ ထိုအခါ သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့် ဘိုးဘိုးမှ
“ဒီဇာတ်ကားမင်းကြည့်စမ်း….. ဟိုတလောကလာတဲ့ တရုတ်ကားအတိုင်းဘဲနော် ….ကြည့်စမ်း အမှောင်ထဲမှာ ကလစ်ပျောက်တာက အစ ….ဟယ် အဲ့အခန်းလေး …အဲ့အခန်းလေး ….ကွတ်တိကြီးပါလား ….ဟင် ခိုးချထားတာ ….ခိုးချထားလိုက်ကြတာ …. ဒါကို အကယ်ဒမီပေးတယ် …သွားပြီဟေ့….သွားပြီ…”
“ဟာ …ဘိုးဘိုးကြီးကလဲ အဲ့တရုတ်ကားက ဘယ်မှာရိုက်တာလဲ …. ”
“မတူဘူးဆို အကယ်ဒမီပေးလို့ရတယ် ဘိုးဘိုးရဲ့….”
“ဟုတ်တယ် ကဲ အကယ်ဒမီလဲအကုန်ပေးပြီးပြီ ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ် ဘိုးဘိုးကြီးရာ….”
နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးသည်သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုး မတားခင်မှာပင်ပြန်သွားတော့သည်။ တော်ကြာ မဖြေနိုင်သည့်မေးခွန်းများမေးနေပါက အခက်တွေ့နိုင်တော့သည်။ ထို့ပြင် နေပြည်တော်ဘိုးဘိုးပြန်သွားတော့ သုဝဏ္ဏအားကစားရုံစောင့်ဘိုးဘိုးမှာလဲ ထိုဗျုတ်စဗျင်းတောင်းပွဲအား မကြည့်ချင်သောကြောင့် သူ၏ သလွန်ကိုသွားကာ ခြေဆန့်လိုက်လေတော့သတည်း
ရွှေရုပ် Read article
Posted on 12/27/2012 by
Update ရပ်ကွက်(၂) “လမ်းပေါ်တွင်ဖဲရိုက်ခွင့်ပေးပါ” ကလေးလေးယောက်ကစာလုံးမပီကလာပီကလာလက်ရေးနှင့်ရေးထားသော ဗလာစာရွက်ကို ၀ါးခြမ်းပြားဖြင့်ညှပ်ကာငုတ်တုတ်လေးတွေထိုင်နေကြသည်။ကလေးတွေရှေ့တွင် နောက်ကလေး တစ်ယောက်က ဗလာစာအုပ်ကို ခဲတံထက်ပိုင်းကျိုးနှင့်ထောက်ကာ ထိုင်နေလေသည်။ ရွှေရုပ်က ရပ်ကွက်ရှေ့တွင် အခွန်လွတ်ဈေးမှ ဈေးဝယ်ပြီးအပြန်တွင် ထိုမြင်ကွင်းအားမြင်လိုက်ရသောကြောင့် ခဏကြာမှင်သက်သွားခဲ့မိလေသည်။ သို့သော် ဘာကိစ္စမဆို သိချင်စိတ်ပြင်းထန်သောကြောင့် (စပ်စုလိုတာမဟုတ်ပါ) “ကလေးတို့ဘာလုပ်နေတာလဲ..” နှပ်တွဲလောင်းနှင့်ကလေးက ရွှေရုပ်အား လှည့်ကြည့်ကာ “ဆန္ဒပြတိုင်းကစားနေတာ..” အမယ် တယ်ဟုတ်ပါလား… ဒီလိုလုပ်ရမည်ဟု မည်သူတွေသင်ပေးသလဲတော့မသိ။ ရွှေရုပ်တို့ ရပ်ကွက်မှကလေးများသည် Update ကျကျ ကစားနည်းမျိုးကို မျက်စိရှေ့တွင်ကစားနေ တော့သည်။ ထိုမှ အိမ်အပြန်လမ်းတွင် ကလေးများသည် လမ်းလယ်ခေါင်တွင် သူတို့၏ အရုပ်ကတ် လေး(ကလေးကားတွန်းတွင်ပါသော ဇာတ်ကောင်များကိုကထ္ထူစက္ကူတွင်ပုံနှိပ်ထားသောကတ်လေး များ)များပေါ်တွင် ပါသောဂဏန်းများကို ထပ်ကာ ဂဏန်းအကြီးဆုံးက ပုံတွေအကုန်ယူရသော ကစားနည်းကို ဖဲကစားသလိုပင် .. “လာကွာ….. ရှစ်….. ” “လာကွာ…. ကိုး…” သြော်… Update ဖြစ်ကြလေခြင်းနော်။ ထို့ထက် ထက်ပြီးသွားသောအခါ ခြေတံရှည်အိမ်အောက်တွင် လူကြီးများစုရုံးစုရုံးဖြင့် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဂဏန်းပေါင်းနေကြပြန်သည်။ ရွှေရုပ်သည် ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးသော အလောင်းစားမြို့တော်ကြီးထဲကိုရောက်သွားသလိုခံစားရ သည်။ ထို့ပြင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဦးလေကြီးတစ်ယောက်ကို လှမ်းမေးသောအသံတွေ ကြောင့် ရှော့ဖြစ်ချင်သလိုကိုဖြစ်လာရသည်။ “ ဦး.. ” “ဟေလကွယ်..” “ဒီနေ့ ဘယ်အလုံးကောင်းလဲ..” ရွှေရုပ်သည် ကြားရသည့်စကားကြောင့် ဘုရားတမိသည်။ ထို့ပြင်ထပ်ကြားရသော စကားများမှာ “ဘယ်အလုံးကောင်းတာထက် ဦးခံစားမိတာတော့ ခွချင်တာဘဲ..” “ဟင် ..ဟုတ်လို့လား ဟိုဘက်က အန်တီပြောလိုက်တာတော့ ဒီနေ့ ညီကိုဆင်းရင်ဆင်းမဆင်းရင် ပူးမှာဆို..” “ဟယ် ညည်းက သူများပြောတာယုံနေတာလား ငါ ညည်းကိုပြောပြသင်ပေးနေလို့ တဲ့ဝင်ဝင်သွားတာ ဘယ်နှစ်ခါရှိပြီလဲ..” “ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ် …. အင်း… ကုန်တာတွေလဲများပြီ ဦးရ အဲ့တော့ ဒီနေ့တော့ ဦးပြောတဲ့ အခွကို တည့်ဝင်အောင် ဆော်လိုက်တော့မယ်..” ရွှေရုပ် သူတို့၏ နှစ်လုံးထီ Update စကားများကိုလိုက်မမှီသောကြောင့် ဘုရားကို အကြိမ်တစ်ရာမက တကာ အိမ်ကိုပြန်လာတော့သည်။အိမ်ရောက်လို့ ဆိုင်ခန်းပြီးသော် “အမ ဖုန်းဆက်ချင်လို့…” “ဟင်… ဟုတ်…ဆက်လေ… ဘယ်ကိုခေါ်ပေးရမလဲ” ထိုကောင်မလေးသည် ခပ်၀၀လေးဖြစ်ကာ မျက်လုံးကို လိုင်နာအမဲတွေနဲ့ကွပ်ပြီး ဆံပင်နီကျဲကျဲကို ဘီးစပတ်လိမ်ထားသည်။ မျက်နှာတွင်တော့ သနပ်ခါးတွေအပြည့်လိမ်းထားသည်။ ဘယ်နိုင်ငံမှ နည်းပညာလဲ မသိပေမယ့် တော်တော် Update ကျတာဘဲတွေးမိပြန်သည်။ ထိုကောင်မလေးက “၀၉၅၀…….” ရွှေရုပ်ခေါ်ပေးတော့ လိုင်းဝင်သွားလေသည်။ တစ်ဖက်မှ “ဟဲလို” ဟူသော အမျိုးသားတစ်ဦးထူးသံကိုကြားရလေသည်။ထိုကောင်မလေးမှလဲ… “ဟဲလို…မောင်လား… ငြိမ်းပါ… မောင်နေကောင်းလားဟင်…. ဟင် …မောင်နေမကောင်းဘူးလား … ငြိမ်းပြောပါတယ် …ဂရုစိုက်ပါဆို… သြော်… စိုက်ပါတယ် လုပ်မနေနဲ့လေ …ခုတော့ အဖျားဝင်ပြီမဟုတ်လား… အခုအဖျားဘယ်လောက်ရှိလဲ … တော်တော်ကြီးနေပြီလား..” ထိုကောင်မလေး၏ သူ၏ ချစ်သူ အပေါ်စိုးရိမ်စကားတွေက ရွှေရုပ်ချစ်သူလဲ အဖျားဝင် နေပြီဟု မနေ့က ပြောသွားသည်ကို သတိရမိသွားသည်။ သူလဲ အဖျားတော်တော်ကြီးနေပြီ ထင်သည်။ ထို့နောက် ကောင်မလေး၏ အသံ အာရုံထဲ ပြန်ရောက်လာလေသည်။ “မောင်က အဖျားကိုမွေးထားမလို့လား … ၁၀၃ဆိုတာ နည်းလို့လား … မောင့်အဖျားကို ခုဖြတ်နော်… ငြိမ်းကိုချစ်ရင် အဖျားကိုဖြတ်ပါမောင်ရယ်…” ဟုတ်သည်။ ရွှေရုပ်ချစ်သူလဲ ဒီနေ့ထိဖုန်းဆက်ပုံမထောက်ရင် သူလဲ အဖျားတော်တော်ကြီးဝင်နေပြီထင်သည်။ သူ့အဖျားကိုလဲ ဖြတ်ရန် ဖုန်းဆက်ပြောရမည်ဟု စဉ်းစားလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ငြိမ်းဆိုသောကောင်မလေး သူ့ချစ်သူအား အဖျားဖြတ်ရန် အကြောင်း ပြောပြီးပြီဖြစ်သည်။ထိုအခါ ရွှေရုပ်မှ ကျသင့်သောငွေတွက်ရန်ဖုန်းကိုယူသောအခါ “အမ ဒီနံပါတ်လေးကိုခေါ်ပေးဦး…” ရွှေရုပ်သည် သူမပေးသော ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်သည် “၀၉၇၃၀….” “ဟဲလို ကိုကိုလား…” ရွှေရုပ်သည် စာအုပ်တွေစီနေရင်းမှ စိတ်ထဲတွင် “ဗုဒ္ဓေါရေ…” ကောင်မလေးသည် ရွှေရုပ်အား ဂရုမစိုက်စွာ ဆက်ပြောလေသည်။ “ကိုကို မနေ့က ငြိမ်းကိုပုံပြင်ပြောသွားတာလား… ငြိမ်းကိုကို့ကိုစောင့်နေတာ တော်တော်ကြာတယ် …နောက်ဆုံးမှ ငြိမ်းပြန်လာတာ …. ကိုကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုလဲ ငြိမ်းဆီရောက်အောင်လာလေ….” ထိုကောင်မလေးသည် သူ၏ ကိုကိုနဲ့ တော်တော်လေးစကားပြောပြီးနောက် နောက်ထက် စာရွက်ပိုင်းလေးတစ်ရွက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီး “ဒါလေးခေါ်ပေးဦးနော် အမ…” “၀၉၄၂၀….” “ဟဲလို….ကိုကြီးလား….” ရွှေရုပ်လက်ထဲမှ စာအုပ်များအောက်ကိုပြုတ်ကျကုန်သည်။ သြော်… သူမလဲတော်တော် Update ဖြစ်နေပါလား တွေးမိသည်။ “ကိုကြီးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ … ငြိမ်းအသံကိုမှတ်မိတယ်နော် … အင်းပေါ့… ငြိမ်းမှာ ပိုက်ဆံပြတ်နေတယ်လေ… ငြိမ်းဘယ်လိုအပြင်ထွက်မလဲ…. ဟယ် ….ကိုကို အဲလေ… ကိုကြီးတကယ်ပြောတာနော် …. ငြိမ်းလာယူမှာနော်… အဟက်ဟက်… ကိုကြီး …အာဘွား…. ပြွတ်ပြွတ်…. ဖလိုင်းကစ်…” ရွှေ့ရုပ်ကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်သည်။ နောက်ထပ်ထပ်ဆက်ဦးမလားဆိုပြီးလေ … ထိုအခါ ကောင်မလေးက “ကုန်ပြီ…” “သြော်…. ကုန်သွားပြီလား…” “အင်း…” ထိုကောင်မလေးက ခပ်တည်တည်ပင်… ရွှေရုပ်လဲ လျှင်မြန်စွာ ဖုန်းဖိုးတွေ တွက်ပေးလိုက်တော့သည်။ ဖုန်းဖိုးတော့ တော်တော်လေးရလိုက်တော့သည်။ ကောင်မလေးကတော့ ရွှေရုပ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ယူသွားကာ “အမ ..ငြိမ်းဒီဖုန်းနံပါတ်ကို သူတို့တွေကိုပေးထားမယ်နော် … အဲ့ဒါ ဖုန်းလာရင် ငြိမ်းကိုခေါ်ပေးလို့ရလား …” “ရတောပေါ့ ဘယ်မှာနေတာလဲ …” “ဟိုအခန်းကိုပြောင်းလာတာ..” ကြည့်လိုက်တော့ ရွှေရုပ်တို့အိမ်ရှေ့မှ အိမ်ခန်းငှားလိုင်းခန်းတွဲလေး ။ ရွှေရုပ်ပျော်သွားသည်။ ဟုတ်တယ်လေ… ဒီလို ဖုန်းဖောက်သည်ကတော့ မလိုချင်ဘဲ ဘယ်သူရှိမလဲနော်။ ထိုကောင်မလေးဆိုင်ထဲကနေထွက်သွားတော့ ရွှေရုပ်မှာ မှိုရတဲ့မျက်နှာကိုဖြစ်လို့ နဂိုမျက်နှာလှလှမှာ အပြုံးကြီးတစ်ခုတွဲခိုနေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိလေတော့သည်။ (အဟီး….ဟီး… Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ ရွှေရုပ်….
Posted on 12/23/2012 by
Update ရပ်ကွက် --------------- အလွန်အေးသောရာသီဖြစ်နေပြီ။ အေးသောကြောင့် အေးတဲ့ရာသီဆိုတော့ ခရစ်စမတ်ရယ်၊ ၀ါကျွတ်တာရယ် အပါအ၀င် အအေးမခံနိုင်သောလူကြီးများသည်လဲတစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ရပ်ကွက်ကိုစွန့်ခွာသွားသည်လဲ ပါသည်ပေါ့။ စနေ တနင်္ဂနွေဆိုလျှင် မင်္ဂလာ ဆောင်တွေမှ ဓါတ်စက်သံများ၊ အအေးမခံနိုင်လို့ အခြားဘ၀ကို ကူးသွားသော လူကြီးများ အိမ်မှ ဖွင့်သော ဓါတ်စက်သံများ ခရစ်စမတ်သီချင်းလိုက်ဆိုသောလူငယ်လေးများ၏ ဂစ်တာသံနှင့် ဂီတသံများ ထို့အပြင် ရပ်ကွက်ရုံးမှ “မီးဘေးရှောင်လို့ မလောင်ခင်တားကြပါ” ဆိုသောသီချင်းသံများ နှင့် ရွှေရုပ်တို့ရပ်ကွက် အလွန်စည်ကားစွာ update ဖြစ်နေလေတော့သည်။ ဒါ့အပြင်ရွှေရုပ် အရမ်းကို updateဖြစ်တဲ့ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကြက်သွန်ဖြူလေး ငါးဆယ်မျိုး တစ်ရာမျိုးဝယ်တဲ့ ၊ နှပ်တွဲလောင်းနဲ့ကလေးတွေဆို နှစ်ဆယ်တန်လေးတစ်ရွက်နဲ့ “ဂျိုဂျင် နှစ်ရုံး …” ဆိုပြီးဝယ်တဲ့ ကုန်မစုံတစ်စုံဆိုင်လေးလဲဖွင့်ထားတယ်လေ။ တောတော်တော့ရောင်း ကောင်းသည်။ အိပ်ရေးဝပြီး လူလဲဝလောက်အောင်ရောင်းကောင်းပါသည်။ အခုတလောတော့ ရွှေရုပ်ဆောင်းတွင်းအေးတာကိုအကြောင်းပြကာ ညဆိုဆိုင်ကို စောစောပိတ်ကာ ဆိုင်မထိုင် အွန်လိုင်းထိုင်တော့သည်။ အရင်တုန်းကတော့ ရွှေရုပ်တို့ ရပ်ကွက်တွင် ရွှေရုပ်ရဲ့အိမ်မှသာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းသော ရွှေရုပ်၏ ကာရာအိုကေ သီချင်းသံမှလွဲလို့ အလွန်ငြိမ်သက်သည်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ရွှေရုပ်တို့ရပ်ကွက်နားတွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံကြီးတွေလာဆောက်ကြသည်။ထို့ကြောင့် အထက်အညာမှ မျက်စိဖွင့် နားပွင့် ပွင့်ချင်တာအကုန် ပွင့်ကြသော အထက်သူအထက်သားတွေ အလုပ်လာလုပ်ကြသည်။ ရပ်ကွက်တွင် ချမ်းသာသူတို့ ပေလေးဆယ် ပေခြောက်ဆယ်တွင် အိမ်တန်းလျားအလုံး ခြောက်ဆယ်(အဲလွန်သွားတယ်) အခန်းရှစ်ခန်း၊ခြောက်ခန်း ပါသောအဆောက်အဦ တွေဆောက်ပြီး အခန်းငှားစားတော့သည်။ စမတ်ကျလေခြင်း။ ဦးနှောက်တွေ update ဖြစ်လေကြခြင်းနော်။ ထို့ကြောင့် ရွှေရုပ်လဲ ဦးနှောက်update ကျသူတစ်ဦးအနေနှင့် လူဦးရေတွေတိုးလာသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူကာ အထက်ဖော်ပြပါ တစ်ဆယ်မျိုး ငါးဆယ်မျိုး လက်မလည်အောင်ရောင်းရတဲ့ (လက်ကမလည်ဘူး ချိုချဉ်ဘဲရောင်းရလို့ ချိုချဉ်ပုလင်းနားဘဲ ၀ဲနေတာ)ကုန်မစုံတစ်စုံဆိုင်လေးဖွင့်ထားရတာပေါ့။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လူများနားညီးတာတော့ အမှန်ပင်။ အခုညတွင်လည်း ရွှေရုပ်၏ အိမ်အပေါ်ထပ်တွင် အွန်လိုင်းထိုင်နေချိန်ဖြစ်သည်။ အသံပေါင်းစုံတို့နှင့်ရင်းနှီးနေပြီဖြစ်သော ရွှေရုပ်မှ စာရေးရင်း မင်္ဂလာဆောင်ဓါတ်စက်မှ တူနှစ်ဖြာသီချင်းလဲညည်းရင်း နာရေးမှ ဘ၀သံသရာသီချင်းလဲလိုက်ဆိုဖြစ်လေတော့သည်။ အခုညဘက်တွေတွင် အေးလို့လားမသိ သွေးပူအောင် ရွှေရုပ်တို့ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညတိုင်း အရပ်ရှစ်မျက်နှာကအလှည့် ကျ ရန်ဖြစ်ကြတယ်လေ။ တကယ်တော့ ဖြစ်ချင်လွန်းလို့ဖြစ်သည်တော့မထင် ။ သွေးအေးနေ လွန်းလို့သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ အခုလဲ ရွှေရုပ်တို့ခြေရင်းအိမ်မှ လင်မယား(ဖြစ်နေကျ) “ဟဲ့ ခုလို လောကကြီးမှာ နင်လဲအလုပ်မလုပ်ရင် ဘယ်လိုထမင်းစားမှာလဲ…” (အရက်မှုးသောသူပြောသဖြင့် အရက်မှုးသံနှင့်ဖတ်ပါ) “အို …ရှင်လုပ်နေတာဘဲ …ရှင့်လုပ်စာနဲ့စားမှာပေါ့လို့…”” ရွှေရုပ်သူများအကြောင်းဘယ်တော့မှ မစပ်စုပါ နားလေးဘဲစွင့်မိသည်။ “ကောင်မ….” “ဘာလဲကောင်ထီး…” ရွှေရုပ်ကြိတ်ရယ်နေရပြီဖြစ်သည်။ “နင့်ကိုယူတုန်းက ငါ့အမတွေက နင့်ကိုမယူခိုင်းတာငါခုမှသိတော့တယ် ..အေး ခုသိတော့ နင်ခုအိမ်ကဆင်း..” “ဆင်းတယ် အကောင်ရဲ့ …ဆင်းတယ်” ထို့နှင့်သူများအကြောင်းမစပ်စုသူရွှေရုပ် အပေါ်ထပ်လိုက်ကာလေး အသာဖွင့်ကြည့်မိသည်။ တကယ်ကိုပင် တစ်ဖက်အိမ်မှ အမကြီး သူ့သမီးလေးကို ခါးထစ်ခွင်ပြီးဆင်းသွားလေသည်(ဆင်းနေကျ) ထို့နောက် အနောက်မှ အဲ့အမကြီး၏အမျိုးသားပြေးလိုက်သွားသည်။ “အောင်မယ် တော်တော်ဆင်းချင်နေတယ်ပေါ့ … ” “အေးဆင်းချင်တာကြာပြီ လိုက်မလာနဲ့နော် …လိုက်မလာနဲ့..” ရွှေရုပ် ပြတင်းပေါက်မှမမြင်ရသောကြောင့် ခြေဖျားထောက်ကာ ကြည့်လိုက်သည် “လိုက်မလာနဲ့ပြောနေတယ်နော်… ရှင့်မျက်နှာကို ကျမ မကြားချင်ဘူး…” “၀ုန်း...” အောက်မှာရှိတဲ့ ဘာကိုမှန်းမသိဘူး ရွှေရုပ်တက်နင်းမိကာ ပြုတ်ကျသည်။ အသံတို့ရပ်ကုန်တော့သည်။ ရွှေရုပ်အသက်ပင်မရှုရဲ။ ရွှေရုပ်အိမ်ဘက်မျှော်ကြည့် ကုန်ကြသည်ထင်သည်။ ရွှေရုပ် ပြတင်းပေါက်တွင် ငုံ့ကာပုန်းနေလိုက်သည်။ ထိုအခါမှ ခုနရန်ဖြစ်နေသည့်လင်မယား သတိပြန်ဝင်လာသည်။ “ခုနက နင်ငါ့ကို ဘာပြောလိုက်တာလဲ” “ဟင်…..” ဟုတ်သည်လေ။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ အဲ့အမကြီး ဘယ်စဉ်းစားတတ်မလဲ။ြ့ပီးတော့မှ “သြော်…. ရှင် ကျမနောက်လိုက်မလာနဲ့ …ရှင့်မျက်နှာ ကိုကျမမကြားချင်ဘူး..” အသံတို့ကတော့ကြားနေရဆဲ ရွှေရုပ်ထမကြည့်ဖြစ် ။ “အေး နင့်အသံလဲ ငါမှမမြင်ချင်တာ …သွားတော့ ” အသံတို့ငြိမ်သွားတော့ ရွှေရုပ်ထကြည့််ဖြစ်သည် ။ဟယ်တော့ …ဟုတ်ပါသည်။ ခုနကရန်ဖြစ်တဲ့လင်မယား ရွှေရုပ်ရပ်တဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုကြည့်နေကြသည်။ ရွှေရုပ်သည် လက်ဝါးကြီးကို အပြားလိုက် နားတွင်ကပ်လိုက်ကာ … “ပြောမောင်ပြော….. အင်း …ဟုတ်တယ် မကြားရလို့ အိမ်ပေါ်တက်လာတာ ခုမှပြတင်းပေါက်ကိုရောက်တယ်… ဟုတ်တယ် အမ်ပီတီကလဲ အဲ့လိုဘဲမမိဘူး…” လင်မယားနှစ်ယောက်တစ်ယောက်တစ်နေရာကိုထွက်သွားကြပြီဖြစ်သည်။ ရွှေရုပ်မှာတော့ လက်ဖ၀ါးနှင့် ကပ်ထားသော ပါးမှာချွေးတို့ဖြင့်………… Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ ရွှေရုပ်
Posted on 11/8/2012 by
“ဖုန်းတွေ နှစ်သိန်းနဲ့ရောင်းပေးတော့မယ်တဲ့”ထိုသတင်းကိုပြောတဲ့သူက လပြည့်သာနေသလိုမျက်နှာ၊ မှိုရတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ စပ်ဖြီးဖြီးကြီးကိုဖြစ်လို့“ဘယ်သူက ငါးသိန်းကနေ နှစ်သိန်းထိ လျှော့ ရောင်းမှာလဲ ပေါက်တက်ကရ ... ”ကျွန်မက လှမ်းမေးလိုက်တော့ “ဂျာနယ်လေး ဘာလေးမဖတ်ဘူးလား ဒီလောက် အုန်းအုန်းထနေတာ”“ဘာ အုန်းအုန်းထ ဘုန်းဘုန်းမ မှ မဖတ်ဘူး ..ဒါနဲ့ နေပါဦး နှစ်သိန်းနဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုတော့ ရောင်းတဲ့သူ ဗိုက်နာနေလို့နေမယ်”မာလာမြင့်စိတ်ညစ်သွားသည်ထင်၏။ သူ၏ ခေါင်းကို လက်ငါးချောင်းနဲ့ ထိုးဖွလိုက်ကာ “မသိဘူးဟေ့... ရောင်းတာက မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ဗိုက်နာနေလား ဗိုက်အောင့်နေလား ငါလဲမသိဘူး နင်ဝယ်မယ်ဆို ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ ခုသွားဝယ်မလို့”ကျွန်မ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးပြုံးလိုက်မိသည် .... သူ့အသံကိုကြားဖို့ လမ်းဘေးက ဖုန်းတွေဆီမှာ နေပူခံစရာမလိုတော့ဘူးလေ . အအေးသောက်ရင်း မုန့်စားရင်း ... တီဗွီကြည့်ရင်း ယုတ်ဆွ အဆုံး အိမ်သာတက်ရင်းပင် သူနဲ့ စကားပြောလို့ရပြီလေ... သို့သော် မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်လွဲတယ်ဆိုတာ ကျွန်မအတွက် ထွင်ထားခဲ့လေသလားမသိဘူး.... ၀ယ်ခဲ့သောဖုန်းမှာ ဖုန်းခေါ်ပြီဆိုလျှင် နီးစပ်ရာ ပြတင်းပေါက်ကို အပြေးကပ်ရသည်။ ထို့နောက် ခေါင်းကို ပြတင်းပေါက် အပြင်ထုတ်ကာ ဆက်ရသည်။ သို့မှသာ ဖုန်းလိုင်းမိတော့လေသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ တစ်ရုံးလုံးလိုလို ပျော်ကြသည်။ နှစ်သိန်းတန်ဖုန်းကို တစ်ယောက်တစ်လုံး ကိုင်နိုင်ကြပြီ ။ ရီလဲရီရသေးတယ် ။ ဖုန်းတွေဝယ်တုန်းကဆို ဖုန်းကိုကိုင်ကာ ကြည့်လိုက်ရီလိုက် .. နောက်ပြီး ဖုန်းကိုထားစရာနေရာမရှိခြင်းပင်။ ဒီပေါ်မှာဆို ပြုတ်ကျနိုင်တယ် ။ ဒီနားက လိုင်းမိပါ့မလား ။ ချာလပတ်လည်စွာပင် ဖုန်းကို ယုယလိုက်ကြသေးသည်။ ထို့ပြင်“ဟဲ့ ညည်းဖုန်း ring ကို ငါနဲ့ အတူတူလိုက်မလုပ်နဲ့ တော်ကြာ ငါ့ဟာလားမသိ နင့်ဟာလားမသိဖြစ်နေမယ် ”ထိုသို့လဲ ပြဿနာတက်ကြသေးသည်။ဖုန်းစ၀ယ်တဲ့နေ့ကဆို “ဟဲလို... ဟဲလို... ဟီးဟီး ဟုတ်....ဟုတ်... ၀ယ်လိုက်တယ်လေ ....အဟက်ဟက်.....မှတ်ထားနော်”“ ရော်ပိုဆယ်ရို.... အိုပါးလား အဟိဟိ .... ဒါလေ မြင့်ဝယ်လိုက်တာပေါ့ ဟီးးးး .. အသံကကြည်တယ်နော် ... မြင့်ဝယ်ထားလို့နေမှာ ”“အဘွားလား ဘွားမြေးလေ ဒီဖုန်းကို ၀ယ်လိုက်တာ ဘွား ထမင်းစားပြီးရေသောက် အဟက်ဟက် ... ဘွား မီးဖုန်းကို နာရီဝက်တစ်ခါ ခေါ်နော် ... အဲ့ဒါမှ အမ်ပီတီက လိုင်းအပြည့်ပေးတာတဲ့ ဟိဟိ... ဒါဘဲနော် အာဘွား.....”တစ်ယောက်တစ်မျိုး ဖုန်းတွေပြောကြသည်။ နောက်ဆုံး ပြောစရာ ကုန်သွားတော့ ရုံးထဲမှာ အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ကာ တိုးတိုး ကြိတ်ပြောကြသေးသည်။ ထိုအထဲတွင် ကျွန်မကတော့ အိနြေ္ဒအရှိဆုံး ဆိုရပေမည်။ ဟီး.... ကျွန်မချစ်သူကို မက်စေ့ပို့ကာ ညနေခုနှစ်နာရီ ဖုန်းခေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောထားသည်။ ကျွန်မတို့ ရုံးတွင် တစ်ခါတစ်လေ ဖုန်းလိုင်းအပြည့်မိသော်လည်း တစ်ခါတလေ တစ်လိုင်းမှမပေါ်ပေ ..ထို့ကြောင့် ဖုန်းပြောလျှင် နီးစပ်ရာပြတင်းပေါက် မှာပြောရသည်မှာ ဖီးပျက်လေတော့သည်။ထို့ကြောင့် ညနေ သူနဲ့ အိမ်ရောက်မှဖုန်းပြောမည်ဖြစ်ကြောင်းမက်စေ့ပို့ခြင်းဖြစ်တော့သည်။ ထို့နှင့် ညနေရောက်တော့“ဟဲလို.... မောင်လား...”မောင့်အသံချိုမြမြကိုကြားရသည်။“အဟွန်းဟွန်း.... မောင်က လားမဟုတ်ပါဘူး လူလူ”“မောင်ကလဲ မနောက်ပါနဲ့ နောက်ဆို ဒီလိုအချိန်စကားပြောကြမယ်နော်”“၀ရှုး.... ဝေါဝေါ..... ”“အာ... မောင်ဘာတွေပြောနေတာလဲ”“.................”သူ့ထံမှ ဘာမှမကြားရတော့ ။ ထိုအခါ ကျွန်မမှာ မောင်ကျာလား ဆင်လား လုပ်ရတော့သည် ။ ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ကာ ပြေးကပ်ရတော့သည်။ ခေါင်းတစ်လုံးကိုအပြင်ထုတ်ဆက်သော်လည်း အဆင်မပြေသောကြောင့် ကိုယ်တစ်ပိုင်းကို ပြတင်းပေါက်မှထွက်ကာ အတင်းဟဲလိုရတော့သည်။ ကျွန်မ၏မောင်ကြားလားတော့မသိ ကျွန်မတော့ပြုတ်ကျရင် ဘ၀ပြောင်းနိုင်ကိန်းဆိုက်နေပြီ... ဒါတောင်“ကောင်မလေး ... ရှေ့ထပ်တိုးဦး မောင်မကြားရဘူး ”“ဘုရားကယ်ပါ.... ဒီမှာ ဒီထပ်ထပ်တိုးရင် အမ်ပီတီဖုန်းမလိုတော့ဘူးမောင်ရေ ... ဒီမှာ တစ်ဝက်က အပြင်ထွက်နေပြီ ”“ဘာ ... မင်းဘာတွေ အပြင်ထွက်နေတာလဲ ပြန်ထည့်ထား ...”“ဟင်...” သူနဲ့ ကျမ ဖုန်းတစ်လုံးစီနဲ့တော်တော်ဒုက္ခများနေတော့သည်။ သူပြောတာ ကိုယ်က တစ်ပိုင်းတစ်စကြား သူက ကိုယ်ပြောတာကို နားစွန်နားဖျားကြားက အတင်းပြန်ထည့်ခိုင်းနေတော့သည်။“ဟာ မောင် ... ဒီမှာလိုင်းက နှစ်လိုင်းတောင်ပေါ်နေတာနော်.. မောင့်ဘက်က ဖြစ်တာ....”“ဟေ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဒီမှာ မောင်က ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်အောက်က ထိုင်ဆက်နေတာ ”“အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ် တာဝါတိုင်ပေါ်မှ တက်မပြောတာ ဘယ်ရမလဲ”“တီ..... တီ.....တီ....”ပြောရင်းဖုန်းလိုင်းပြတ်သွားတော့သည်။ကျွန်မပြန်ခေါ်သော်လည်း“လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ ပြင်ပရောက်နေပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍မရနိုင်ပါရှင်”ရအောင်ဆက်မှာပေါ့ ဆိုပြီး မရမချင်းဇွဲကောင်းကောင်းနှင့်ခေါ်နေမိသည်။သို့သော် သူကလဲ လူကြီးမင်းကြီးဘဲအော်တော့သည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တွင်မတော့“ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းကိုယ်တိုင်သည် ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာ ပြင်ပရောက်သွားပါသဖြင့် မည်သို့မှ ခေါ်ဆိုလို့မရနိုင်ပါရှင်”ဟင် ငါ့ဖုန်း.... ဘာ....ဘာ...ကောင်းရော ...ပြတ်ရော ... ကျွန်မဖုန်းကို ပြတင်းပေါက် ဘောင်ပေါ်တင်ကာ ထွက်လာခဲ့တော့သည်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ရွှေရုပ်